ဥပါဒါန် သို့ သန့်စင်ခြင်း
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်း ရဲ့ အကွက် ( ၂) နဲ့ ( ၃) အကြား မှာ သုံးပါးအစပ် ဆိုသော အစပ် သုံးပါးထဲက တဏှာ အစပ် ဆိုတာ ရှိကြောင်း ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာ ဘုရားရှင် က ရှာဖွေ ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်..။
ဘုရားပွင့် တာ ဗောဓိပင် အောက် မှာ ပွင့်တာ မဟုတ်..ဝေဒနာ နဲ့ တဏှာ ကြား မှ ဘုရားပွင့်တာလို့လည်း ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရား မိန့်တော်မူသော တရား နာကြားခဲ့ဘူးပါတယ်..။
သူက ကြိမ် ကြိမ် ကြိုးကုတ် တည်ဆောက် လုပ်သည့် အကြောင်းရင်းသမုဒယသစ္စာ ဖြစ်သော ** ဟယ် တဏှာ ယောင်္ကျား ..လက်သမား ****
သင့် ကိုမြင်နိုင် ဥာဏ်မဏ္ဍိုင် ဖြင့် ပိုင်ပိုင်သိသိ ရရှိ ခဲ့ ပြီး လို့ ဘုရားရှင် ဥဒါန်းကျူး ခဲ့တာကို လေးမြတ်စွာ ပူဇော်ရင်း ပီတိ များစွာ ဖြင့် ရိုးကျိုးဦးခိုက်မိပါတယ်..။
ကျွန်မ တို့တစ်တွေက တော့ အာရုံ နဲ့ ဒွါ ရတိုက်လို့ ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာ နဲ့ အရိပ်ကိုအကောင် ထင် ပြီး တဏှာ အစပ်ကို သတိ မရ..အကွက် (၂) နဲ့ (၃) ကို တစ်ဒိုင်းဒိုင်း ပြေသွားကျင်လည် ခဲ့ရလှ ..ကာလများ အဘယ် မျှ ရှည် ကြာခဲ့ပြီ လဲ မိသတော့ပါ..။
အာရုံ နဲ့ ဒွါ ရတိုက်လို့ ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာ နဲ့ သတ္တဝါ ကို အထည် ထင်...သော ဒိဋ္ဌိ အမြင် ၊ ကပ်ညိသော တဏှာ၊ ငါ သူတစ်ပါး လို့ မှတ်ယူပါသော မာန စသည် တို့ တစ်ပေါင်းတည်း ပေါ်လာလိုက် ကာ သံသရာချဲ့ ထွင် ခရီးနှင် လာခဲ့တာ...။ ခေါင်း သာ ပြောင်းခဲ့..သော ခန္ဓာ များစွာ..။
တဏှာ ဆိုသော စကားလုံး ကို စိတ်ဝင်စားသလို Key Point အဓိက ကျ တဲ့ အချက် တစ်ခု အဖြစ် ကျွန်မ နားလည် လိုလှပါတယ်..ပယ်သတ်လိုလှပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ကြီး ကတော့ ***တဏှာ ကို ဘာသာပြန် ပေးတာ အာရုံ ၌ကပ်ညိခြင်း ၊အာ ရုံ ၌ချုပ်စပ်ခြင်း *** လို့ ဘာသာပြန် ပြ ပါတယ်..။ အင်္ဂလိပ် လိုဆိုရင် Clinging လို့ ဆိုပါတယ်..။
ဆရာတော် ဘုရား က ပိုမို နားလည် လွယ် အောင် ဥပမာ ပေးပြီးရှင်းပြတော်မူပါတယ်..။
ဥပမာ ထမင်းဝိုင်း မှာ တဲ့ ချဉ်ရည် ဟင်း ပန်းကန် ကို တွေ့ ပြီ ဆိုရင် သူ့နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ငပိထောင်းတို့ ငါးကြော် တို့ ငါးခြောက်ကြော် တို့ ကို တမ်းတဖြည့်စွက်ပုံဖေါ်လိုက်တာ…. ပုံဖေါ် တွေး ရင်း တစ်ပုံ ကနေ တစ်ပုံ ဆက်သွား တာ တဏှာ အစပ် ကူးသွားတာလို့ ဥပမာပေးပါတယ်..။
ကိုယ့်သားသမီးလေး တွေ အရွယ် ရောက် လာတဲ့အခါ မေတ္တာ ကကြီး..ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာ အမြဲ ထုတ် လွှတ်နေတဲ့ မိခင် ဆိုတော့ ကြည့်လိုက်တာ နဲ့ လည် ပင်းမှာ ဘာမှ မရှိရင် ဆွဲကြိုးလေးပုံဖေါ်..လော့ကက်လေးပုံဖေါ် တွေးတော့တာ..ရွှေ ဆိုရင် အဆင့်နိမ့် သေးတယ် စိန်ကို ထပ်ပုံ့ဖေါ် ပြန်ပါတယ်..။ ဒါ တဏှာ အစပ် ပဲ..။ အာရုံ တွေ တစ်ပုံ ပြီး တစ်ပုံ ချုပ်စပ် ပုံဖေါ်သွားတာ ပဲ လို့ ဥပမာ ပြဘူးပါတယ်..။
အဲဒီတဏှာ ကပြင်းထန် လာတဲ့ အခါ ဥပါဒါန် အဆင့်ကိုကူးပါသတဲ့..။ ဥပါဒါန် ကို ဘယ်လို နားလည် ရပါမလဲ ဘုရား လျှောက် တင်တဲ့အခါ ..။ ** ဆုံးဆုံး ဖြတ်ဖြတ် ကြံစည်ခြင်း ** လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်..။
အင်္ဂလိပ်လို Craving = An intense desire for some particular thing လို့ မှတ်သားရပါတယ်..။ ပြင်းထန်သော စွဲလန်းမှု ရဲ့ မောင်းနှင်မှု ကို ကျွန်မ တို့ ရှေ့ရှု လျှောက်လှမ်းနေကြတယ် ဆိုတာ သူသူ ငါငါ မြင် တွေ့ ရပါတော့တယ်..။
မနက် စောစော မိုးလင်း ကတည်းက သူကမောင်းနှင်တော့တာ……..
ငါ မသေခင် ..ဒါလေးမြင်ချင် လိုက်တာ ဆိုတဲ့ လူအိုပိုင်းတွေ ကလည်း…..သူ့ဥပါဒါန် နဲ့ သူပေါ့..။
လူငယ် တွေကလည်း တက်ကျမ်းမျိုးစုံဖတ်ပြီး…..အနာဂတ် အိပ်မက် များ အတွက် သူ့ဥပါဒါန်က သူတို့ကို မောင်းနှင်ပါတယ်..။
လူလတ် ပိုင်း တွေကလည်း **တော်ပါပြီ --ဥပါဒါန် ** ဆိုတာရှိသတဲ့..။ ဘယ်လို တော်တာပါလဲ ဘုရားဆိုတော့..။ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားက ဒကာမ တစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြတော်မူပါတယ်..။
**ဘုန်းဘုန်းရယ် ကိုယ် ပိုင် ဝန်းခြံလေး နဲ့ နေရရင်တော်ပါပြီ….တဲထိုးနေရ..နေရပါ တဲ့။ ***
တဲလေး ထိုးလာနိုင်တော့..** ဘုန်းဘုန်း ရေ..သစ်သားအိမ်လေး နဲ့ နေရရင် တော်ပါပြီ….****
သစ်သားအိမ်လေး ရလာတော့ *** ဘုန်းဘုန်းရေ…. သစ်သားအိမ် ကမခိုင်ဘူး အုတ် တိုက် လေး နဲ့ နေရရင်တော်ပါပြီ*** အုတ်တိုက်ကနေ ကား..ကားတစ်စီးကနေ နှစ်စီး..စတဲ့ တော်ပါပြီဇာတ်လမ်းသည် …တော် ကိုမတော် နိုင်တော့ပါ တကား..။
သူများသာပြောတာ……ကျွန်မ တို့မလည်း ကိုယ့်ဥပါဒါန် ရဲ့ မောင်နှင်ခြင်း အတိုင်းရွေ့လျားစီးမြော…. အရှိန်အဟုန် များသာ ကွားခြားတော့သည်သာ ..။
စိတ်ကူးယဉ် တတ်လွန်းသောကျွန်မ သည်…ငယ်ငယ် ကဝတ္တု များထဲကအတိုင်း….
တောင်ကြီး ရောက်လျှင်..သူငယ်ချင်း လိုပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင် ထဲက ခိုင်ကိုသတိရ..ခိုင်ခုန် ချခဲ့ သော ထင်းရူး ပင်များ ရှိရာ တောင်ကုန်း လေး တကယ်ရှိနေသယောင် ယောင် ကိုကြည့်ချင် တဲ့ ဥပါဒန် ဖြစ်မိပါတယ်..။
မကွေး ရောက်ပြန်တော့ ..တိုင်းမင်းကြီး သမီး ဝတ္ထု ထဲက ခင်ရွှေအေး လို ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းက သဲ ဖွေးဖွေးတွေ ကြည့်ချင်ပြန်ရော..။
တစ်ခါ တစ်ခါစိမ်းမြနေတဲ့ လက်ဖက်ခင်းတွေကြည့်ကာ ….. တောင်ယာခင်းလေး ထဲ မှာ ပဲပြောင်းစိုက်… လက်ဖက်ခူး ကာ နေချင် စိတ် ဖြစ်….....
ရန်ကုန် ကို မွန်းကြပ်သော.... ပကာသန ထုံမွှမ်းသောနေရာဟုအပြစ်မြင်....
ဟို တနေ့က ပိုင်းလော့ဆရာတော် တရားနာရင်း စကားအဆန်း တစ်ခု နာယူရတာ မို့ ကျွန်မ သေသေချာချာ မှတ်သားမိပါတယ်..။
တဏှာ အစပ်ကို ဆက်ဆက် မှန်းသိ…. ပြတ် ပြတ် မှန်းသိ အောင် သတိ ရှိ နေဘို့ လိုကြောင်း..။ သတိ ရှိ နေဘို့ ဆို ..**ဥပါဒါန် ကို အရင် ဖြို ရတယ်** တဲ့..။
တော တောင် တွေကို စိတ်ကျက်စား ကာ တောနယ်တစ်ခုခု က မြေ မှာ ခြံ တစ်နေရာရာ ဝယ်ဘို့ အမြဲ ဥပါဒါန် ကပ်ထားသော ကျွန်မ ရဲ့ ဥပါဒါန် ကို ကျွန်မ ဒီလို ဖြို ကြည့်ပါတယ်..။
လက်ရှိ ကို တန်ဘိုး မထားတတ်သော လူ့သဘာဝကို အရင်နားလည်…။
လက်ရှိများ ကို တန်ဘိုးထား စိတ် ပြောင်းကြည့်ပါတယ်..။
ကံအကျိုးပေးကပစ်ချ လိုက်သော ရန်ကုန် သူကျွန်မ ရန်ကုန် မှာ နေရပါတယ်..။
နေအိမ်ကနေ မိနစ် ၃၀ လမ်းလျှောက်ရင် ရောက် နိုင်သော အင်းလျား ကန် သည် ဧရာဝတီ တို့ အင်းတော်ကြီး တို့က ရေပြင် များ လို လှပ သည်ပဲ..။
ချည်ခင်စွပ်ငှက် ..ဒင်ကြီးငှက် များကို ချစ်သလိုပဲ…. ရန်ကုန် ကျီးကန်းတွေ ခိုတွေ စာကလေးများ သည်လည်း ချစ်စရာ…။
မိနစ် ၃၀ခန့် ကားနှင့် သွားလျှင်…. ၃၁ ဘုံ မှာ အတုမရှိသော လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံစေတီကို အလွယ် တကူဖူးမျှော် နိုင်သည်ပဲ..။
၁၅ မိနစ် ဆိုလျှင်တော့ ငယ် ဘ၊ဝ က၊ ဒေသ ကောလိပ်တက်စဉ် သန့်ရှင်းရေးအသင်းဖြင့် ကုသိုလ် လက်ရာခြေရာများ ကြွင်းကျန် ရစ်သော ကိုးထပ်ကြီး ဘုရားသို့ ရောက်နိုင်သည်ပဲ..။
မီးခြစ်ပုံး အခန်းလေး လို့ ကျွန်မ ကနှိမ့်ချ ဖွဲ့ ဆိုခဲ့သော ၅လွှာ ကအခန်းလေး သည် လည်း တကယ်တော့ မြောက်ပြန်လေ ညှင်း တစ်သုန်သုန်…. ….နဲ့ အေးမြသည်ပဲ..။
လက်ရှိ နေရာ ကို တန်ဘိုးထားသလို လက်ရှိအချိန် ထက်ကောင်းသော အချိန် သည်လည်း ဘယ် မှာ ရှိပါမည် လဲ..။
ဟိုနေရာဟာ ဒီနေရာထက်မကောင်းနိုင်သလို….ဟိုအချိန် ဟာ ဒီအချိန် ထက် ပိုမကောင်း စေနိုင်..ပါဆိုတာ သေချာခဲ့ရ..။
**တောနယ် ကျေးလက် က တောတောင်ရေမြေ တစ်နေရာရာ မှာ ကျွန်မ ရဲ့ အနာဂတ် ဘဝ တစ်ခု** ရှိတယ် ဆိုသော ဥပါဒါန် ကို ကျွန်မ အခု လို သန့် စင်ကြည့်မိပါတယ်..။
တောတောင်ရေမြေ များသည် စကားမပြောသောပုံရိပ်များ… ဓာတ်ကြီးလေးပါးအစုအဖွဲ့ မျှသာ……
အရာရာအကြောင်းညီ ညွတ် မှ ဖြစ်တတ်ပါသော ကံအကျိုးပေး ကို လည်း နားလည်…..
စိတ်ကူးယဉ် ခြင်းသည် စိတ်ကူး သာဖြစ်၍..အကောင်းအထည် မဟုတ်ပါကြောင်း ဥာဏ် အားဖြင့်လည်း ဖြိုခွင်း…
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့အမှတ်တရ..**ဥပါဒါန်သို့ သန့်စင်ခြင်း** ဖြစ်ပါတယ်..။
ထိုသန့်စင်ခြင်း ဖြင့် ၂ နှင့် ၃ ကြား ပြတ်တောက်ပါစေသား။။။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ (၂၀၁၅)
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 8:53 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ဓမ္မကိုနားလည်ခြင်း, လပြည့်နေ့များကိုပူဇော်ဦးခိုက်ခြင်း
အမြတ်တနိုး ဖြစ်လွန်း တဲ့အရာတွေ ဟာထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲစွ…..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်က နေရာတစ်ခု….ဘဝ တစ်ဆစ်ချိုးစေခဲ့သော….
ဘဝ ရဲ့ အိုအေစစ် တစ်ခု လိုဆိုတာ….အတိတ် နဲ့ နှိုင်းနှိုင်း……..အနာဂတ်နဲ့ ယှဉ်ယှဉ်……ရင်ထဲ မှာ တော့အေးမြ မှုသာကျန်ရစ်…တာ အမှန်..။
ဒီ AIT သွားမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကျတော့ AIT Alumnus Card ကိုပြန်ရှာမတွေ့ ….တော့..။ ပုံ ထဲက ဒီကျောင်းသားကဒ်လေးသာ ထွက်လာခဲ့တာ……။
ကျွန်မ တို့ကျောင်းသားဟောင်းတွေဟာ Alumnus Card နဲ့ဆိုရင် AIT Alumnus အကျိုးခံစားခွင့်တွေရှိသတဲ့..။
AIT Hotel မှာ တည်းရင် ၂၅% လျှော့ပေးပါ့မယ် တဲ့..။ AIT Golf ကွင်းမှာ ကစားခွင့်.. Swimming Pool မှာရေကူးခွင့် ရှိုပါတယ်..။
၂၀၁၁ ဂျူလိုင်က ကျွန်မ မဟာစရက္ခန် တက္ကသိုလ် မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ကို ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ပင့်ဆောင် စဉ် မှာ ကျွန်မ ဒီအခွင့်အရေး ကို ခံစားခွင့်ကြုံပါတယ်..။
မြန်မာ အသင်းရဲ့ Activity အဖြစ် ဆရာတော်ကို ပင့်ဆောင်လိုကြောင်း ၊ အခန်း ၂ခန်း ရရှိ လိုပါကြောင်း Email ပို့ထားလိုက်တာ..။
၂ ညစာ၂ခန်းဆိုတော့ တစ်ည ၁၂၀၀ ဘတ် နဲ့ ဆို ဘတ် ၄၈၀၀ ပေးချေရမှာ….. AIT Alumnus Card ကြောင့် ဘတ် ၃၆၀၀ သာ ပေးချေ လှူဒါန်း ခဲ့ရပါတယ်..။
ကျွန်မ ရဲ့ ဆရာတော်ဘုရားခေတ္တသီတင်းသုံးရာ ကျောင်းအလှူ ထဲ မှာ AIT သည် ကုသိုလ် ရှယ်ယာ ပါဝင်ခဲ့သည်ပဲ..။
၂၀၁၁ အောက်တိုဘာလ ထဲမှာ ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့တာ ရက်ပေါင်းကြာရှည် စွာ ….အိမ်တလုံးစာအမြင့် နစ်မြုပ်နေသော ဓာတ်ပုံများ ကို မကြည့်ရက် ရက်..ကြည့်ခဲ့ရတာ…။
၂၀၁၂ မေ မှာ ကျွန်မ တစ်ခါ ပြန်တည်းတော့ AIT Hotel ပထမ ထပ်မှာ နေရာရပါမယ်… အင်တာနက် မရပါ..။ဆိုသော အီးမေးလ် ပြန်စာ ကို ရပါတယ်..။အောက်ဆုံးထပ်သည် ရေဖြင့်ပျက်စီးခဲ့ပြီ……။
ကျွန်မ တို့ ဘွဲ့ ယူစဉ် က နှစ်ယောက်တစ်တွဲ တွဲ လျက် သီချင်းသံနှင့် အတူ ဆင်းလျှောက်ကာ ခန်းမ ထဲ ဝင်ခဲ့ရသော ကောဇော နီအုပ်ထားသည့်လှေကား သည် မာကျော မဲပြောင်နေသည့် သံမံ တလင်းဖြစ်လျက် တွေ့ရတော့ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ ကတုန် ကယင်..။
ပေါင်မုန့်ကျွေးခဲ့သော ကန်ထဲက ဧရာမ ငါး တွေ မရှိရှာလေတော့…။
စက်ဘီးဖြတ်စီးခဲ့ သောယုဇန ပန်းရုံ စည်းရိုးတန်း က ရေ အမြုပ်မှာ ဆုတ်နစ် သေဆုံးခဲ့ပါပကော…။
ကျွန်မ တို့ ရဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ် စုစည်းရာစာကြည့်တိုက်…။ဗုဒ္စ္ဒဘာသာ ဘုရားခန်း ။ ကျောင်းတက်ရာ FEBT Lab…..
ဆက်လက် ၍ ရင်ဆိုင် နိုင်စွမ်းမရှိသောကျွန်မ မှာ နာကျင်လှစွာ ကျောင်းထဲသို့ လုံးဝခြေဦးပင်မလှည့် လှည့်ပြန် ခဲ့ ပါတော့တယ်..။
၂၀၁၃ မှာ ရောက်တော့ စာကြည့်တိုက် ထိကြည့်နိုင်ခဲ့..သို့သော် Thesis များပျောက်ဆုံး နေတဲ့ သံမံတလင်းကြမ်းပြင်…..ကို တွေ့ရဆဲ…ဆိုတော့မပျော်နိုင်။
တကယ်တော့လည်း …သက်မဲ့ အရာများသည် စကားမပြောပါ..။
ကျွန်မ တို့ ရဲ့ ရင်ထဲက (တဏှာ+မာန+ဒိဋ္ဌိ) ကစကားပြောနေ လေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ ရိပ်မိခဲ့ပါတယ်..။
ငါ့ကျောင်း လေ…ငါ့နေရာပေါ့..ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ ရှိခဲ့တာ….. စတဲ့ငါ ဖြင့် တွယ်တာရစ်နှောင်….ထုံးဖွဲ့..။
ငါ စကောလားရှစ်ရခဲ့တာ..ငါဘွဲ့ရခဲ့တာ ဆိုသော မာန ..အတ္တမာန တို့ဖြင့် အတိတ်က ဆောင်းခဲ့သော ရွှေ ထီးကို ပြန်လည် ကြည့်ချင်ခြင်း လည်း ပါပါမယ်..။
ရေ..မြေ..တော တောင် ဆိုတာက
ဓာတ်ကြီးလေးပါး အစုအဝေး..ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတတ်သော သဘောအစု ဖြစ်ပျက် မှုသည် ရုပ်တရား ပါတကား..။
လောက ထဲ မှာ တည်မြဲသော ..ခိုင်ခန့် သော အရာ....မပြောင်းမလဲ တည်ရှိပါသော အရာ ဘယ် မှာ ရှိပါမည်နည်း..။
ပျက်စီးခြင်း မှာတောင်…World Trade Center ပြိုလဲ ခဲ့တယ်…။Nepal Land Mark ငလျင် မှာပြိုကျ ခဲ့တယ်..။
ကျွန်မ ဘာမှ မခံစားရ….။
AIT ရေနစ်တော့ ဝမ်းနည်း တယ်..ကြေကွဲ တယ်…။
ဘာလို့လဲ.......ငါဖြင့် ဖက်တွယ် ခဲ့သကိုး..။
ဒါဆို ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်း သည် ငါ..ငါ့ဥစ္စာ လို့ ထင်မှတ်မှားမှုကြောင့်ပေါ့…။
ငါဆိုသော ဒိဋ္ဌိကြိုးဖြင့် ချည်နှောင် တွယ်ရစ်..
ငါ..ငါ့ဥစ္စာ အဖြစ် မသိမ်းပိုက်ခဲ့ ရင် ခံစားတတ်ပါတယ် ဆိုသော နှလုံးသား သည် တုတ်တုတ် မျှပင်လှုပ်မည် မဟုတ်..။
ဒီတရား ကို နှလုံးသွင်းရင်း ကာကွယ် ဆေးထိုးကာ ကျွန်မ ချစ်ခဲ့ပါသော AIT သို့ ကျွန်မ သွားပါ အုံးမယ်..။
ဟိုရောက်တဲ့အခါ ကျရင်တော့ လွမ်းနေခြင်းဖြင့် မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆ...သတိပဋ္ဌာန် စိတ်နေမှန်ဖြင့် အခုလို …….
ဆင်ခြင် မှုကို သတိရ မိပါစေကြာင်းလည်းဆုတောင်း မိပါရဲ့.. ရှင်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 12:08 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် AIT, ဓမ္မ ကိုနားလည်ခြင်း
မေတ္တာ မဲ့သော ဓါး ပါးစပ်များ
ဒီနေ့ မနက် ဘုရားရှိခိုးတဲ့ အချိန်မှာ ဘုရားရှင် ရဲ့ လက္ခဏာတော် (၃၂) ပါးဘုရားရှိခိုး ကို ကြည်ညိုရင်း အပိုဒ်၁၇ မှ----သွားတော် (၄၀) စေ့၍ သွားတော်မကျဲ သိပ်သဲ စေ့စပ် ကြောင်း ကို ဆင်ခြင် မိပါတယ်..။
**ကုန်းတိုက်စကား ၊ ကျဉ်ရှောင်ရှား ၍
ကွဲပြားမကပ် ၊ ကြားစေ့စပ် သဖြင့်
စေ့စပ်ပြီးကို ၊ မြဲအောင်ဆိုခဲ့
ထိုကုသိုလ်တော် ၊ နှိုးပင့်ဆော် ၍
သွားတော်လေးဆယ် ၊ပြည့်ဖြိုးကြွယ် လျက်
သေးသွယ် စိပ်စိပ် ၊သိပ်သိပ်ထူထဲ
မကျဲသွားမှာ ၊ လက္ခဏာဖြင့်
ညီညာ မြဲစွဲ ၊ သူပင်ခွဲလည်း
မကွဲပြိုနိုင် ၊ ကြံ့ခိုင်စေ့စပ်
ပရိသတ်သာ ၊ ရှိတော်မူပါသောမြတ်စွာ ဘုရား ၊ မြတ်စွာဘုရား ။
ဒီ ဘုရားရှိခိုးကို ဆင်ခြင် ပူဇော်တတ် လျှင် ရုပ်လက္ခဏာ ကို လူကဲခတ်တတ်၊ နိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး က မိန့်တော်မူဘူးပါတယ်..။
ဘုရားရှင် ရဲ့ စကားသစ္စာ ကြောင့် ကြံ့ခိုင်စေ့စပ် ပရိသတ် တွေ ဟာ လမင်းကြီး ကို ကြယ် များ ဝန်းရံ သလို ထာဝစဉ် တင့်တယ် နေတော့တာ ပါတဲ့..။
ကျွန်မ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် မှာ လှပ ညီညာသောသွားလေး တွေ ဖြူဖွေး နေသောသူများတွေ့မြင်တိုင်း အားကျစိတ် နဲ့ ငေးနေမိဘူးပါတယ်..။
ကျွန်မ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ရဲ့ မေတ္တာမဲ့သော ဓါးပါးစပ်တွေ ကြောင့်ထိရှ နာကြင် ခဲ့ ပါလျှင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ မလှပခဲ့သောအတိတ်ကို ဆင်ခြင်လျက် အပြစ်မယူမိအောင်ကြိုးစားရပါတယ်..။
အတိတ် ဘဝ တွေ မှာ အဘယ် မျှ ကုန်းတိုက်ခဲ့လေသည် မသိ..။ ချစ်ခြင်းတွေကို ကွေကွင်းစေခဲ့သည် မသိ..ကျွန်မ အတွက် ထာဝစဉ် တစ်ဒိုင်းဒိုင်းပြေးနေရသည် မှာ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးကုခန်းများ သာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
နှုတ်စကားတစ်ခု ကြောင့် လောင်မြိုက်ခံစား ရရှာသော လူသားပေါင်းများ စွာ ရဲ့ ပရိဒေဝ မီးများ ကို တတ်နိုင်သမျှ သိမ်းဆည်းရလေအောင် ကျွန်မ ဒီစာ ကို ရေးမိပါတယ်..။
အကုသိုလ် တရားဆိုတာ ကိုယ်က မလုပ်မိအောင်ဆင်ခြင် နိုင်သော်လည်း ကိုယ့်ကို ပြုမူလာခဲ့လျှင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်ရမယ် ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီး လှပါတယ်..။
မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီး တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကြား မှာ ကုန်းချော ၊ကုန်းတိုက်ခြင်း ၊ ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုကြခြင်း ၊ သိမ်ဖျင်းသော စကားများကို အချိန်အကုန်ခံပြောဆိုနေမယ်ဆိုလျှင် ပြောသူရဲ့ နှုတ် ပါးစပ် မှာ မေတ္တာ ကင်းမဲ့နေတာ ထင်ရှား လှပါတယ်..။
မေတ္တာ ကင်းမဲ့နေသော သူရဲ့ နှုတ်ပါးစပ် ဟာ အလွန် ထက်မြက် နေတဲ့ ဓါးတစ်လက် နဲ့ အတူတူ ပါပဲ ။ ( အနော်မာ -မေတ္တာမဲ့သောဓါးပါးစပ်များ စာ ၆၈) မှာ ဖေါ်ပြထားတာကို ကိုး ကားဖေါ်ပြပါရစေ..။ အနော်မာ က အရှင်သောဘိတာဘိဝံသ ( ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ကျောင်း ) နဲ့ မေးမြန်း ထားတာ.. ဆရာတော် ရဲ့ တရားက မှတ်သားလိုက်နာဘွယ် ပါ..။
((( ပါးစပ်ဆိုတာ စားသုံးခြင်း ။စကားပြောခြင်း အလို့ ငှာ သာ အသုံးပြုကြပါတယ်..။ ဘယ် အရာမဆို စိတ်က အဓိက ပဲ မဟုတ်ပါလား ။ တရားအားထုတ် တဲ့နေရာမှာလည်း ဘယ်လို နည်းနဲ့ ပဲအားထုတ် အားထုတ် အဓိက ကတော့ သတိပါပဲ ၊
****စကား ရဲ့ အချုပ် က ကတိ ၊
****တရား ရဲ့ အချုပ်က သတိ ။။။။။။။။။………………………ဖြစ်ပါတယ် ..။
ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ မကောင်းမှုတွေကို ပြောရရင် ကံသုံးပါးလုံးပါဝင်နေပါတယ်….။
(၂) သူတပါး ပစ္စည်းကို မပေးပဲ ယူခြင်း
(၃) မကျူးလွန် ထိုက်သော မိန်းမ ၊ယောင်္ကျား တို့ ၌ ကျူးလွန် ခြင်း ၊
ဝစီ ဒုစရိုက် (၃)ပါး
( ၄) မမှန်ကန်သော စကားကိုပြောဆိုခြင်း
(၅) ကုန်းချော ၊ကုန်းတိုက်ခြင်း
(၆) ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုခြင်း
(၇) အဖျင်စကား ကိုပြောဆိုခြင်း
မနောဒုစရိုက် (၃) ပါး
(၈) သူ့ ဥစ္စာကို မိမိ ဥစ္စာ ဖြစ်လို ၍ ကြံစည်ခြင်း
(၉) သူတစ်ပါးကို ပျက်စီးစေလိုခြင်း
(၁၀) မှားသော အယူရှိခြင်း
ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းသော ဝစီကံ ဖြစ်ဘို့ဆိုရင် ကောင်းသော မနောကံ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ ကောင်းသောမနောကံ မရှိတဲ့ အတွက် ဝစိဒုစရိုက်ဆိုးတွေ ထွက်ပေါ် လာတတ်တာ လို့ ဟောကြား တော်မူပါတယ်..။)))
ဒီတရားကို ဖတ်ရှု ပြီးတော့ *မေတ္တာမဲ့သော ၊ ဓါးပါးစပ်* ရဲ့ နောက်ကွယ် ကမနောကံ သည် မှားသောအယူ ဖြင့် မည် မျှ အမှောင်ဖုံး နေတယ် ဆိုတာ သိရှိနားလည် ရပါတယ်..။
သူကအပြော မတတ် တာပါ ဟု ဆိုသော်လည်း မေတ္တာ ကင်းမဲ့ နေတာကတော့အထင်အရှားပါ..။
သူတစ်ပါး ရဲ့ နှလုံးသား တွေ ရှက်ရွံ့ စိုးထိတ် သွားစေလိုက်မယ်..။
ငါ့ထက် တော့ဘယ် နည်းနဲ့ မှ မသာစေရဘူး..။
အားလုံး ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တွေ င့ါ ထံစုစည်းလာစေဘို့ ဒင်းကို အပုပ်ချရမယ် ၊။။။။ ဟူသော အဓိပ္ပါယ် သည် စကားလုံး တိုင်း ရဲ့ စေစားချက် တွေ ပါပဲ..။
ကံ အကျိုး ပေးကို ဆင်ခြင် တတ်သော ကျွန်မ ကတော့ သွားမညီ ညာ ခဲ့ တဲ့အတိတ်ဖြင့် ဝဋ်ကြွေး တရားများကို ကြေအောင်ဆပ်ပါအုံးမယ်..။
ခန္ဓာ ငါးပါး ရဲ့ ဖြစ်ပျက် ကို ရှုမှတ်နေသူ ဖြစ်လို့ လည်းကျွန်မ အားပြောသမျှ တွေကို ပုံရိပ် မထင် ရေပေါ်အရိပ် ရေးသလို စိတ် မှာမထင် ပျောက်ပျက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
ဝစီဒုစရိုက် မှန်းမသိရှာလေပဲ ကံ အသစ် ယူကာ ကျွန်မ အတွက် ဝဋ်ကြွေး ဆပ်ပေး နေသူ များကို ကျေးဇူးတင်စွာ ကရုဏာ ထား၍ မေတ္တာ ထားနိုင်ရန် ကြိုး စားရမည် မှာ ကျွန်မ တာဝန် ပဲ မဟုတ်ပါလားရှင်..။
ကျမ်းကိုး === စာရေးသူ အနော်မာ ရဲ့ မေတ္တာ မဲ့သောဓါးပါးစပ်များ ကို ကိုးကားရေးသားအပ်ပါတယ် ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:48 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ဓမ္မ ကိုနားလည်ခြင်း, မေတ္တာပါရမီ
ဘဝ အိုအို နေညိုချိန် အတွက် Que Sera Sera
လူ့လောက ထဲကို မသိခြင်း များစွာ ဖြင့်ယောင်လည် လည် ရောက်ရှိ လာခဲ့သောကျွန်မ တို့ဟာ အရာရာကို သိလိုစိတ်များ ပြင်းပြထက်သန် ခဲ့တာ မဆန်းလှဘူးပေါ့..လေ။
အဲဒီ သိလို စိတ်များစွာ ထဲမှာ ရှေ့ ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ ဆို တဲ့ ရောက်မလာသောအနာဂတ်ကို မျှော်လင့် စိတ်ကူး ယဉ် ရတာဟာ လူတိုင်းလို လို ပါပဲ..။
အနာဂတ် မှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ ကို ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ ကျွန်မ တို့ငယ်ငယ် က Que Sera Sera ဆိုတဲ့ Spanish သီချင်းလေးကို လူတိုင်းမှတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်..။
စပိန် ဘာသာက အီတလီ ဘာသာ နဲ့ ဆင်တူ တာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဥပမာ Que Ore ဆိုတာ ဘယ် အချိန် လဲ လို့ မေးတာမျိုးပေါ့..။ Que Sera Sera ဆိုတာ ဘာဖြစ်မှာလဲ ..ဘာတွေ ဖြစ်လာမှာလဲ ဆိုတာ မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးဟာ သူကလေးဘဝ တုံးမှာ သူမရဲ့ အမေ့ ကိုမေးကြည့်တယ်..
*အမေ ရယ် သမီးကြီးလာရင်လေ သိပ် ချောတဲ့ မိန်းမလှလေး ဖြစ်မှာလား ၊ ချမ်းသာကြွယ် ဝတဲ့ သူ ဖြစ်လာမှာလာ* မေးတာပေါ့..။
အမေ ကပြန် ဖြေတယ်…*သမီးရယ်..ဖြစ်လာမှာ ဟာဖြစ်လာမှာ ပဲပေါ့..အနာဂတ် ဆိုတာ ငါတို့ မပိုင်ဆိုင်ပါဘူး*တဲ့..။
နောက် အဲလို သိချင်လွန်း တဲ့ကလေးမလေးဟာ ချစ်သူရလာတော့လည်းချစ်သူ ကိုမေးပြန်တယ်..။ *ချစ်သူရေ..ကျွန်မ တို့ ရဲ့ အနာဂတ် ဟာ လှပ တဲ့ သက်တန့် တွေ ဟာ မိုးရွာ ပြီးစ ဆည်းဆာ ချိန်မှာ စောင့်ကြို နေ မှာ လား ။ အဲလို ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေ ကို ငါတို့ လက်တွဲ ပြီး ဖြတ်သန်းရမှာလား* မေးပါတယ်..။
အဲဒီအခါ သူ့ချစ်သူ ဟာ အမေ့လိုပဲပြန် ဖြေခဲ့ပါတယ်..။*အချစ်ရယ်..ဖြစ်လာမှာ ဟာဖြစ်လာမှာ ပဲပေါ့..အနာဂတ် ဆိုတာ ငါတို့ မပိုင်ဆိုင်ပါဘူး*တဲ့..။
အဲလို နဲ့ ကြီးပြင်းရင့်ကျက် လာတဲ့ကလေးမလေးဟာ တနေ့ မှာ သူကိုယ်တိုင် အမေ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီမေးခွန်းကို သူက မမေးတော့ဘူး။သူဟာ လောက ကို နားလည် တဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပြီ..။
သို့သော် သူ့ သမီး လေးက သူငယ်ငယ် ကလို မေးတာကိုောတ့ကြုံ တွေ့ ရပြန်တာပါပဲ..။ ဒီတော့ သူ့ ရဲ့ အဖြေ ဟာ မိတ္တူ ကူးချတာ မျိုးမဟုတ် ပဲ ဘဝ ပေးအသိ နဲ့ ယှဉ် တဲ့ အဖြေ ပဲ ဖြစ် နေတာ..။
*ချစ်သော သမီးလေးရယ်..ဖြစ်လာမှာ ဟာဖြစ်လာမှာ ပဲပေါ့..အနာဂတ် ဆိုတာ ငါတို့ မပိုင်ဆိုင်ပါဘူး* ဆိုတဲ့ မရိုး နိုင်သောအဖြေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ကျွန်မ မှာလည်း ဘဝရဲ့ အနာဂတ်ကို မျှော်ငေးတမ်းတတဲ့အခါ ဒီသီချင်း လေးကို အမှတ်ရမိလေ့ရှိပါတယ်..။
ကျွန်မ ကတော့ ဒီသီချင်းလေးထဲကလိုအမေ နေရာ ရောက်ရတဲ့အခါ…. သီချင်းထဲကလို တော့မဟုတ် …ပဲဖြေချင်မိပါတယ်။
တရားအလုပ်လုပ် တဲ့အခါ..အနာဂတ်ဆိုတာ လက်ရှိ ဘဝ ပစ္စုပ္ပန် ရဲ့ အကျိုးဆက် ပုံ ရိပ်များ ဖြင့် ထိုက်သင့်သလောက် ထုဆစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သိ လာခဲ့ပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ အဆုံးအမ ကြောင့် လည်း ဘဝဆိုတာ ရဲ့ အကြောင်းအကျိုးကို သိရှိခဲ့နားလည်ခဲ့ ကျင့်သုံးလိုက်နာ နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
*အခုတွေးသော စိတ်ကူး အမျိုးအစားသည် အနာဂတ် ဘဝ အတွက်မျိုးစေ့ဖြစ်ပါသည်။
*အချိန်တိုင်း တွေးနေရင်း ဘဝပြောင်းနေသည်။
*အကျိုးကို ပွားလို့ မရ အကြောင်းကိုတည့်အောင် ပြုလုပ်ပေးရမယ်..။
*အရင်က ကောင်း လို့ အခုကောင်းသည် ။အခုကောင်းလျှင် နောင်ကောင်းပါလိမ့်မည် ။
စတဲ့ လမ်း ညွှန် ချက်များသည် * Que Sera Sera ,The future not ours to see * ထက်တော့ သာလွန် လိမ့်မယ် ဆိုတာ ကျွန်မ တော့ ယုံကြည်နေမိပါတယ်..။
တစ်ခါ တစ်ခါ ဝိပဿနာ အားထုတ်သော ယောဂီများက စီးပွားကျ မှာလည်းကြောက်တတ်ကြပါသေးတယ်…။
တရား အားထုတ် ဘို့ အတွက်အချိန် ပေးရဲသော သတ္တိ…။
ကုသိုလ် တရားအတွက် အချိန် ပေးရဲသောသတ္တိ သည် နုံ့ နဲ့ လွန်းစွ.ပါတကား။
အသက်ကြီး ရင် ဘယ် သူက ကျွေးထားမှာလဲ..။
နေမကောင်း ရင် ဘယ်သူကပြုစုလုပ်ကျွေး မှာလဲ..။
ဆေးခန်းကို တစ်ယောက်တည်းသွားရမှာလား စတဲ့ မေးခွန်း တွေဟာ အသက် ၅၀ကျော်လာကတည်းက ချိမ်းခြောက် နေသော * Que Sera Sera များစွာ…။
ဒီတော့လည်း ဝိပဿနာ တရားပြဆရာ ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားသည်…. Whatever will be will be ရယ်လို့ မဖြေပါ..။ တိကျသော လမ်းညွှန်ချက်များ ဖြင့် တိကျ စွာ ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်..။
• မျက်စေ့ တစ်ကမ်း ၊ လက်တစ်လှမ်း အတွင်း မှ လူတစ်ဘက်သား များစွာကို ကုသိုလ် ၊ပညာ၊ ဥစ္စာ တိုးတက်အောင် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ အမြဲ စဉ်းစားပြီး လုပ်ကိုင် ဖြည့်ဆည်းပေးနေရပါမယ်..။
• တစ်ဘက်သားပျော်အောင် ၊ စိတ်ချမ်းသာ ၊ကိုယ်ချမ်းသာ ရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပျော် တဲ့ ၊ အပေးနဲ့ ပျော် တဲ့ သတ္တိ နှလုံးသားမှာ ရှိနေပါစေ..။ တဲ့..။
ဒါဆို အနာဂတ် မှာ အိုဇာတာ မကောင်းမှာတွေးပူမနေပါနဲ့ တော့ တဲ့..။ ထိုထို သောကုသိုလ် မှ သည် မဂ်ဥာဏ် ၊ဖိုလ် ဥာဏ်ကို လက်လှမ်း မီကာ တဏှာ အစပ်ဖြတ်နိုင်ကြ လိမ့်မယ် ဆိုတာ ကျွန်မ ကတော့အသေအချာ ယုံကြည်မိပါတယ်..။ The Future must be ပါရှင့်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:27 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ပင်ကိုဥာဏ်နုံနဲ့သူမဖြစ်အောင် နှင့် ပါရမီ (၁၀) ပါး
ကျွန်မ ရဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ တစ်ဦးက နေပြီးဘဝ...ဘဝတွေမှာ ကျင်လည်နေရတုန်း ပင်ကိုဥာဏ်နုံနဲ့ရသူမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပါရမီတွေ ဖြည့်ကျင့်ရမလဲ။ ဆောင်းပါးလေးရေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုလာတာနဲ့ ဒီစာစုလေးကိုရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ပါရမီဆိုတဲ့ စကား လုံးကို လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး ရဲ့ "ဥတ္တမပုရိဿ ဒီပနီ" ကျမ်းမှ ထုတ်နှုတ်ထားတာကတော့
ပါရမီ = မြတ်သော ဘုရားလောင်း စသော သူတော်ကောင်း တို့၏ ကုသိုလ်ကံ တရားစု၊ နိဗ္ဗာန်ဟူသော တဖက်ကမ်းသို့ ရောက်စေတတ်သော ကုသိုလ်ကံ တရားစု။ ရယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်..။
ပုံပါ စာသားလေးအတိုင်းကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ရဲ့ ပါရမီ၁၀ပါး သရုပ်ပြပုံလေးဖြစ်ပါတယ်..။ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကတော့ ပါရမီကို အိုနာသေဖက်ကမ်း မှ အိုနာသေ လွတ်ရာဖက်ကမ်းသို့ရောက်စေသော အလုပ်လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်..။
ကျွန်မတို့ အားလုံး ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာ ဘုရား သည် သာမန် လူ ဘ၀ ကနေ ၃၂ပါးသမိုက်ထားသော ယောင်္ကျားမြတ်တို့ ရဲ့ လက္ခဏာတော် တို့ နဲ့ ပြည့်စုံသော ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်စေခဲ့တာ ဒီ ပါရမီ ၁၀ပါး ကိုလေးသင်္ချေ ကမ္ဘာတစ်သိန်း တိုင်အောင် ဘ၀အဆက်ဆက် ဖြည့်ကျင့်ခဲ့လို့ ပဲဆိုတာကို ဒီသရုပ်ဖေါ်ပုံလေး နဲ့ ရှင်းလင်းပြပါတယ်..။
ပါရမီ (၁၀) ပါး တွေကတော့
၁။ ဒါနပါရမီ= ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ကိုယ်အင်္ဂါနှင့် အသက်ကိုစွန့်လှူခြင်း။
၂။ သီလပါရမီ = ငါးပါသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလ စသည်တို့ကို စောင့်ထိန်းခြင်း။
၃။ နေက္ခမ္မပါရမီ = လူ့ဘောင်လောက နှင့် ကာမဂုဏ်အာရုံများကို စွန့်လွတ်တောထွက်၍ ရသေ့ရဟန်းပြုခြင်း။
၄။ ပညာပါရမီ = လောကီပညာ လောကုတ္တရာ ပညာတို့ကို သင်ယူဆည်းပူး ကျင့်ကြံခြင်း၊ သူတစ်ပါးတို့အား သင်ပြပေးခြင်း။
၅။ ဝီရိယပါရမီ = မိမိအကျိုး၊ သတ္တဝါများ အကျိုးအတွက် သက်စွန့်ကြိုးပမ်းကာ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း။
၆။ ခန္တီပါရမီ = ဒေါသမထွက်၊ စိတ်ပျက် အားငယ်မှုမရှိ၊ မွန်မြတ်ကြည်အေးစွာ အလျော့ပေး၍ သည်းခံခြင်း။
၇။ သစ္စာပါရမီ = မုသားမပြော၊ သူတစ်ပါးအားမထိခိုက်စေပဲ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်စွာ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်း။
၈။ မေတ္တာပါရမီ = သတ္တဝါများကို မိမိနှင့် ထပ်တူပြု၍၊ ချစ်ခင်ကာ အများချမ်းသာ ကောင်းစားရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၉။ အဓိဌာန်ပါရမီ = တစ်စုံတစ်ခုသော ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ရန် စိတ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
၁၀။ ဥပေက္ခာပါရမီ = သတ္တဝါတို့အားမုန်းလည်းမမုန်း၊ ချစ်လည်းမချစ်၊ ဘက်မလိုက်ဘဲ မျှမျှတတ အလယ်အလတ်တည့်မတ်စွာ စိတ်မတုန်လှုပ်အောင်ထားခြင်း။ ရယ်လို့ လည်းသိရှိနိုင်ပါတယ်..။
ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက က အတိုချုပ်မှတ်သားနိုင် အောင် လင်္ကာလေးစီပေးထားပါတယ်..။
ဥပေက္ခာ ။လို့ အလွယ် မှတ်မိနေစေပါတယ်..။ ဒီပါရမီ တွေ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် တွေအရဆိုရင် သူတစ်ပါးကို လောကီပညာ လောကုတ္တရာ ပညာတို့ကို သင်ယူဆည်းပူး ကျင့်ကြံ ရာမှာ အားပေးခြင်း၊ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ကြံခြင်း။ သူတစ်ပါးတို့အား သင်ပြပေးခြင်း။ ဆိုတဲ့ ပညာပါရမီ ဖြည့်ကျင့်စေရင် ဘ၀ အဆက်ဆက် တူသောအကျိုးဖြင့် ပင်ကိုဥာဏ်နုံနဲ့ရသူမဖြစ် တော့ ပါဘူး..။
ပညာသည် ရှေ့ဖြစ်မဲ့ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ခွဲခြားတတ်တဲ့ အလင်း ကိုဆောင်တတ်တာမို့ အလင်းရောင် အလှူ တွေ လှူ ခဲ့ရင်လည်း ဥာဏ်အလင်း၊ သစ္စာအလင်းတွေ ထွန်းလင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ကျွန်မ အတွေ့အကြုံ အရ ပြောရရင်…ကျွန်မ ရဲ့ သားသမီးတွေ ကို ပညာရေးအဆင်ပြေအောင်တက္ကသိုလ် တက်ကတည်းက တရားစာအုပ်များလှူဒါန်းခိုင်းပါတယ်..။ ကျောင်းအားရင်လည်း မိဘမဲ့ကျောင်းတွေ မှာ စာလိုက်သင်ခိုင်းပါတယ်..။ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် ဗလာစာအုပ် တွေ လှူခိုင်းပါတယ်..။ ကျွန်မ က အဝေးမှာ နေရပြီး တစ်နှစ်မှ တစ်ခါ သာမြန်မာပြန်လာနိုင်တာမို့ သေချာစေတဲ့နည်း တွေ ပေးရပါတယ်..။ ကိုယ်သိသလို သူများသိပါစေ..။ သိတဲ့ အတွက်အကျိုးရှိပါစေဆိုတဲ့ စိတ်စေတနာလေးထည့်ပေးလိုက်တာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေလာ တာတွေ့ရပါတယ်..။ သူတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်လုံး နိုင်ငံခြားပညာသင် စကောလားရှစ်များလည်း ရကြပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားသင်ပေး ဘူးတာကတော့ ပညာတတ်တဲ့ လူတွေ ၊ အသိပညာပြည့်စုံတဲ့သူတွေ တွေ့ရင် မုဒိတာ တရားပွားပေးရမယ်..။ မနာလိုစိတ်တစ်စက်မှ မရှိရဘူး တဲ့..။ ပညာပြည့်စုံမှုကို ၀မ်းသာပေးရပါတယ် တဲ့..။တချို့ဆို အမှတ်မဲ့ ပြောမိတာ..ဥာဏ်ကလည်းထိုင်းလိုက်တာ စာသင်ပေးမနေနဲ့ ဆိုတာမြည်တွန်တောက် တီးမိရင် ကိုယ်လည်းဘ၀အဆက်ဆက် ပညာမတတ်ဖြစ်ရပါတော့တယ် တဲ့..။
အခု ခေတ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လည်းမသိပဲ နဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ဆိုတာအလကား ဘာမှ တတ်တာမဟုတ် ဘူး..။စသည်ဖြင့် နှိမ့်ချပြောဆိုကြတာ သတိထားဘို့ လိုပါတယ်..။ ကိုယ် ကဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစား၊စာတော်သော်လည်း ဒေါက်တာဘွဲ့ မရဖြစ်တတ်ပါတယ်..။၀စီဗေဒ၊ထိတိုင်းရှ…တူသောအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်..။
နေ့စား လူတွေ တွေ့ လားတဲ့..တစ်နေ့စာ စီမံပြီးလှူခဲ့လို့ တဲ့..။
လခစား တွေတွေ့လားတဲ့….တစ်လစာ..ရေတို..စသည်ဖြင့်အကျိုးများအောင် စီမံလှူဒါန်းခဲ့လို့ ပါတဲ့..။
ဒီလိုပဲ တစ်နှစ်စာ..တစ်ဘ၀စာ ..တစ်သံသရာ လုံးစာ အကျိုးများစေတဲ့အလှူ ကတော့ ရေရှည်ခရီးမှာ မှန်ကန်တည့်မတ်တဲ့အသိဥာဏ်နဲ့ ရေရှည်လျှောက်လှမ်းသွားစေနိုင် တဲ့ ဓမ္မဒါန အလှူ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။
ဒါကြောင့် အိုဇာတာကောင်းချင်ရင်..တစ်သံသရာလုံးစာ ပညာအလင်း ရချင်ရင် ဓမ္မဒါန ကောင်းမှုတွေ လုပ်ရပါမယ်တဲ့..။
ကိုယ်သိတဲ့ တရားအသိ တစ်ကြောင်း၊တစ်ဂါထာ၊ စာတစ်ပုဒ်၊ စာအုပ်တစ်အုပ် စီဒီတစ်ချပ်ကစလို့ ကိုယ်သိသလို သိပါစေရယ်လို့ စေတနာ နဲ့ ပေးလှူတာ ဓမ္မဒါန ပါ..။
တရားပွဲ တွေ စီမံ လှူဒါန်းတာမျိုး..
စာသင်သားတွေ ကို ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းတာ
ဓမ္မသင်တန်းတွေ…မှာ လှူဒါန်းတာတွေ..အကြုံးဝင်မှာပါ…။ ချဲ့ထွင်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်..။ ဓမ္မစကြာ တို့ ပဋ္ဌာန်းတို့ ရွတ်ရင်တောင် နာယူနေတဲ့ နတ်များအတွက် ဓမ္မဒါန ပါလို့ စိတ်ညွှတ်လိုက်လည်းရပါတယ်..။
ဒီပါရမီ (၁၀) ပါးထဲက ပညာပါရမီ တစ်ခု ထဲကို ရွေးလုပ်ရမှာ တော့မဟုတ်ပါဘူး..။
ဆရာတော်ဘုရားသင်ကြားပေးတဲ့နည်းကတော့ ..မေတ္တာ ပါရမီက စဖြည့်လိုက်ပါတဲ့..။
မေတ္တာ ပါရမီ ဆိုတာ သူတစ်ပါး ကို မုန်းတဲ့စိတ်မပေါ် ၊ အကျိုးလိုလားစိတ် နဲ့ ရင်ထဲမှာ စိမ့်ကနဲ အေးကနဲ ဖြစ်မှ တကယ့်မေတ္တာဖြစ်တာပါတဲ့..။
မေတ္တာ ဖြစ်လာမှသာ ကျန်တဲ့ ပါရမီ ၉ပါးလုံး ကအလိုလို ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာပြီးအလိုလို ဖြည့်ကျင့်ရာရောက်ပါတယ်တဲ့..။
မေတ္တာ ဓာတ်တွေ အလွယ်တကူဖြစ်ဘို့ ကျတော့ သူတစ်ပါး ရဲ့ကျေးဇူးကို သိတတ်ရပါတယ်။ ဖေါ်ပြရပါတယ်..။ အခွင့်သင့်ရင် ဆပ်ရပါတယ်..။
• မေတ္တာဖြစ်ပေါ်စေသော အနီးဆုံးအကြောင်း သည်ကျေးဇူးကိုဖေါ်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။
• ကျေးဇူးမြင်ရင်မေတ္တာပေါ်သည်။ကျေးဇူးပျောက်ရင်မာန ပေါ်သည်။ လို့ ကျင့်ဆောင် လိုက်နာရပါတယ်..။
အဲဒီမေတ္တာ ဓာတ်ကို သာရအောင် ဆောင်နိုင်ရင် အရာရာအောင်မြင်ပါတယ် တဲ့..။
ဒါကြောင့် မို့ လို့ လေ…. တစ်လောကလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်နဲ့ သာကြည့်ပြီး ပေးဆပ်နိုင်ဘို့သာ ကြိုးစားပါတော့တယ်..။
ဒါဆို ရင် **ပင်ကိုဥာဏ်နုံနဲ့ရသူမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပါရမီတွေ ဖြည့်ကျင့်ရမလဲ** ဆိုတဲ့ ဖြည့်ကျင့်ရမဲ့ ပါရမီ ကို သိလောက်ပြီလို့ ယူဆရပါတယ်ရှင့်..။
* ခေတ္တ မက်စ်ဟိုတယ်၊နေပြည်တော်*
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:02 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
အမရာ ရဲ့ နှလုံးသား အလင်းရောင် (သူတော်ကောင်းတို့ နှလုံးသား)
အခု ခေတ် ဘာသာရေးမေးခွန်းတွေ ဆိုတာက မိလိန္ဒ မင်းကြီး က အရှင်နာဂသေန ကိုမေးမြန်းတော်မူသောမေးခွန်းများ ထဲ ကမလွတ် ဆိုတဲ့ စကားကို ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသည်ကိုနာကြား ရကတည်းက မိလိန္ဒပဥှာ ပါဠိတော် နှင့်မြန်မာပြန် ကို ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်..။
ဆရာတော်ဘုရား ဟောကြားသောတရားမှတဆင့်လည်း တချို့သော မေးခွန်းများကို ကြားသိထားတာလည်းပါပါတယ်…။ ကျွန်မ မွေးနေ့ အတွက် သားကြီး ကိုအုတ် က ဒီစာအုပ်ကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေး ခဲ့တာပါ..။
အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်း တစ်ခု ကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှု ပူဇော်မိတာ…။ ကျွန်မ တို့ မိန်းမ တွေ ဆိုတာကလည်း အပြစ်ပြောစရာ တယ် များတဲ့ ဘ၀ မို့လား။
မိလိန္ဒ မင်းကြီး မေးတဲ့မေးခွန်း တစ်ခု က *သဗ္ဗညုတ ဥာဏ၀ဂ်* မှာ ပါတဲ့ *အမရာဒေ၀ီ ပဥှာ* နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုမေးပါတယ်..။
*((မိန်းမအားလုံး တို့သည် ပင် အခွင့်အခါ ကို ၄င်း ၊ ဆိတ်ကွယ် ဖုံးလွှမ်းရာကို၎င်း ၊ အကယ်၍ ရကုန်သည်ဖြစ်အံ့ ။ မိမိလင် နှင့်တူသော ဖိတ်မန်သူကိုလည်း အကယ်၍ ရကုန် သည်ဖြစ်အံ့။ မကောင်းမှုကို ပြုကုန်ရာ၏ ။ တပါးသော သူကို မရခဲ့ သော် ခြေလက်ဆွံ့ သူနှင့်သော်လည်း အတူတကွ မကောင်းမှုကို ပြုကုန်ရာ၏))*ဟု ဤ စကားကို မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်..။တဲ့။
တဖန်လည်း * (( မဟောသဓာ ၊ ပညာရှိ ရဲ့ မယား အမရာမည်သော မိန်းမသည် ရွာငယ် ၌ ပစ်ထားခဲ့ ၍ လင် နှင့်ကွေကွင်းလွတ်လပ်လျက် ဆိတ်ကွယ် ရာ၌ နေရ၍ ဆိတ်လည်းဆိတ်ငြိမ်ပါလျက် မင်းနှင့်တူသော လင်ကို ပြု၍ တစ်ထောင်သော အဿပြာ နှင့်ဖိတ်မန်ပါလျက် မကောင်းမှုကို မပြုပေ ))* ဟုလည်း ဆိုပြန်ပါ၏။
ထိုသို့ အစွန်းနှစ်ဘက် ထွက် နေသော တရားစကား တွင် ဘယ် အရာ သည် အမှန်ဖြစ်သနည်း ဖြေကြားပေးပါ တဲ့..။
ဒီနေရာ မှာ ကျွန်မ စဉ်းစားမိတာက အော်…မိန်းမ တွေ က ဒီလို သဘာဝ ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲ ခံရတယ်ဆိုတာ တရားတော် ထဲ မှာ ရှိခဲ့တာ ကိုး..။ မဟာပဒုမ တို့ ဘာတို့ ရဲ့ ပေါင်တို ဇာတ်လမ်း များကိုလည်းငယ်ငယ် ကတော့ကြားဘူးနားဝ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်..။
အော်..တော်လေးဝ ၀င် တဲ့ ( အမရာ၊ ကိန္နရီ၊ မဒီ၊ သမ္ဘုလ) တို့ ကလွဲ ပြီး ဒီလို လေပဲ လား လို့ တွေးမိပါတယ်..။
သို့ သော် အသျှင်နာဂသေန ရဲ့ အဖြေစကား ကြောင့် ကျွန်မ ဘ၀င်ကျ ကာဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်..။
*(( မင်းမြတ် ၊ ထို အမရာ ဟူသော မိန်းမသည် စိစစ် တတ်သော ဥာဏ်ပညာ အလင်း ရှိသော ကြောင့် သူမ ရဲ့ ဥာဏ်အလင်းရောင် အောက် တွင်…
၁။ အခွင့်အခါ ( အခွင့်အလန်း)
၃။ မိမိ လင်နှင့်တူသော ဖိတ်မန်သူ တို့ ကို တစ်ဦးမျှ ပင်မမြင်ပါလေ….တဲ့။ ထို့ကြောင့် ထို အမရာ ဆိုသော မိန်းမ သည်မကောင်းမှုကို မပြုပေ ။ ))* လို့ ဖြေကြားတော်မူပါတယ်..။
ထိုသို့ မမြင် သော အမရာ ရဲ့ ဥာဏ်အလင်း ကို ကျွန်မ က အထူးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်..။ မိန်းမ သည် လည်း သွေးသား နှင့်ပြုလုပ်အပ်သော ၊ နှလုံးသားရှိသော ၊ အမျိုးအစားပင် မဟုတ်ပါလား။
၁။ အခွင့်အခါ (ဒါ ဟာ ငါ့အတွက်အခွင့်အလန်းပဲ) ရယ်လို့ အမရာမမြင် ရတဲ့ အကြောင်း တွေကတော့….
= ဤလူ့ပြည်လောက ၌ သူတပါးကဲ့ရဲ့ မည် ကြောက်သောကြောင့် အခွင့်အခါကိုမမြင်လေ..။
=တမလွန် လောက ၌ငရဲဘေး မှကြောက်သောကြောင့် အခွင့်အခါကိုမမြင်လေ..။
=မကောင်း မှုဟူသည် ခါးသက်သော ၊ စပ်ရှားသော အကျိုးရှိသည်ဟု စိစစ် ၍ အခွင့်အခါကိုမမြင်လေ..။
=တရားကိုရိုသေ သည် ဖြစ်၍ အခွင့်အခါကိုမမြင်လေ..။
= မစင်ကြယ် အမှုကို ကဲ့ ရဲ့ စက်ဆုပ်သည်ဖြစ်၍ အခွင့်အခါကို မမြင်လေ..။
=မိမိပြုသင့်သည့်ဝတ်အကျင့်ကို မဖျက်ဆီးလိုသည် ဖြစ်၍ အခွင့်အခါကိုမမြင်လေ.. ။
= လင်ကိုအလေးအမြတ်ပြု သည်၏ အဖြစ်ကြောင့် အခွင့်အခါကိုမမြင်လေ..။
= ချစ်သောလင်ကို မစွန့်လွှတ်လိုသောကြောင့် အခွင့်အခါကိုမမြင်လေ..။
အမရာ ရဲ့ ဥာဏ်အလင်း မှာ များစွာ သောအကြောင်းတို့ ထင်လင်းလာတဲ့အတွက် အခွင့်အခါ ကို မမြင်..ထို့ကြောင့် မကောင်းမှုကိုလည်း မပြုခဲ့..။
၂။ ဆိတ်ကွယ် ရာ ကျတော့ ကော..အမရာဘယ်သို့ စိစစ်ခဲ့ပါသလဲ..ကျွန်မ ဆက်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်..။
အမရာ ရဲ့ ဥာဏ်အလင်း ၀ယ်…
=လူတို့ မှ ဆိတ်ကွယ် ရာ ကို အကယ် ၍ ရငြားအံ့..။ နတ်တို့ မှ ဆိတ်ကွယ်ရာကို မရ။
=နတ်တို့ မှဆိတ်ကွယ် ရာကို ရငြားအံ့..။ သူတပါးတို့ ၏ စိတ်ကို သိကုန်သော ရဟန်း တို့ မှ ဆိတ်ကွယ်ရာကို မရ။
=သူတပါးတို့ ၏ စိတ်ကို သိကုန်သော ရဟန်း တို့ မှ ဆိတ်ကွယ်ရာ ရငြားအံ့ ။ သူတပါးတို့ ၏ စိတ်ကို သိကုန်သော နတ် တို့ မှ ဆိတ်ကွယ်ရာကို မရ။
= သူတပါးတို့ ၏ စိတ်ကို သိကုန်သော နတ် တို့ မှ ဆိတ်ကွယ်ရာကို ရငြားအံ့..။ မိမိသည်ပင်လျှင် သိ၍ နေသဖြင့် မကောင်းမှု မှ ဆိတ်ကွယ်ရာကို မရနိုင်။
= မိမိသည်ပင်လျှင် သိ၍ နေသဖြင့် မကောင်းမှု မှ ဆိတ်ကွယ်ရာကို ရငြား အံ့..။ မတရား ဖြင့် ဆိတ်ကွယ် ရာကို ရသည် ဖြစ်ရာ၏ လို့ အကြောင်းတရားများစွာ အမရာ စိစစ်ခဲ့ လို့ မကောင်းမှု မပြုဖြစ်ခဲ့ပါ..။
၃။ နောက်ဆုံး စိစစ် ခဲ့တဲ့ အချက်ကတော့ အမရာ ရဲ့ ဥာဏ်အလင်း ဦးနှောက် ထဲက အချက်သာမက နှလုံးသားထဲက စွဲမြဲထားတဲ့ မဟောသဓာ ပညာရှိ ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ ကို ဆင်ခြင် ခဲ့ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
= မဟောသဓာပညာရှိသည် နှစ်ဆယ့်ရှစ်ပါးသော ဂုဏ်အင်္ဂါ တို့ နဲ့ ပြည့်စုံပါသတဲ့..။
= မင်းမြတ် မဟောသဓာသည် ရဲရင့် ၏။
= မဟောသဓာသည် မကောင်းမှု ၌ရှက်တတ်၏ ။
= မဟောသဓာသည် မကောင်းမှု ၌ ကြောက်လန့်တတ်၏ ။
= မဟောသဓာသည် အသင်အပင်း ရှိ၏ ။
= မဟောသဓာသည် အဆွေခင်ပွန်းများ နှင့်ပြည့်စုံ၏ ။
= မဟောသဓာသည် သည်းခံတတ်၏ ။
= မဟောသဓာသည် သီလရှိ၏ မှန်သောစကားကို ဆိုတတ်၏ ။
= မဟောသဓာသည် စင်ကြယ်သော အကျင့် နှင့်ပြည့်စုံ၏ ။
= မဟောသဓာသည် အမျက်ဒေါသ မရှိ။
= မဟောသဓာသည် ထောင်လွှားမှု မာန မရှိ။
= မဟောသဓာသည် ငြူစူစောင်းမြောင်း မှုမရှိ။
= မဟောသဓာသည် လုံ့လရှိ၏ အားထုတ်၏ ။
= မဟောသဓာသည် သူတပါးကိုချီးမြင့်တတ်၏ ။
= မဟောသဓာသည် ခွဲခြားဝေဖန်လေ့ရှိ၏
= မဟောသဓာသည် အပြောအဆိုပြေပြစ်၏ ။
= မဟောသဓာသည် နှိမ့်ချသော သဘောရှိ၏ ။
= မဟောသဓာသည် သိမ်မွေ့၏။
= မဟောသဓာသည် စဉ်းလဲခြင်း မရှိ၊ လှည့်ပတ်ခြင်း မရှိ။
= မဟောသဓာသည် လွန်ကဲသောပညာနှင့်ပြည့်စုံ၏။
= မဟောသဓာသည် ကျော်စောခြင်းရှိ၏ ။
= မဟောသဓာသည် အတတ်ပညာနှင့်ပြည်စုံ ၏ ။
= မဟောသဓာသည် မှီခိုလာသောသူတို့ ၏ အစီးအပွားကို လိုလားလေ့ရှိ၏ ။
= မဟောသဓာ ကိုလူအားလုံး ကတောင့်တ၏ ။
= မဟောသဓာသည် ပစ္စည်းဥစ္စာ ရှိ၏ ။
= မဟောသဓာသည် အခြံအရံများ၏ ။
ထိုသို့ အရည် အချင်းပြည့်စုံ သော ယောင်္ကျားမြတ် တစ်ဦး စိုးမိုး နေရာယူ ထားသော အမရာ့ ရဲ့ နှလုံးသား ကောင်းကင် ၀ယ် တပါးသော ယောင်္ကျား များသည် လမင်း ဘေးမှ မတောက်ပရှာ သော ကြယ်မှုံ၊ ကြယ် မွှားများသာ ဖြစ်လေသည် တကား…။ ဒါကြောင့်လည်း မည်သို့ လွှမ်းမိုး နေရာယူနိုင်ပါမည် နည်း..။
ဒီအမေးအဖြေ လေးကို ဖတ်ပြီး အလောင်းတော် နှစ်ဦး ရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါ တို့ကို အကြိမ်ကြိမ် ဦးညွတ်မိသလို…..ရဲရင့်သော အမရာ ကို မိန်းမသားထု ဘက်ကနေလက်ခုပ်တီးမိပါတယ်..။
ကျွန်မ တို့ မိန်မသား တို့ အတွက် ဦးဆောင်လမ်းပြပေးတဲ့ အမရာ့ ရဲ့ စိစစ်ဝေဖန် နိုင်တဲ့ ဥာဏ်အလင်း ကို ပိုလို့ မြတ်နိုးဦးခိုက်မိပါတယ်..။
ဒီစာစု ထဲက အမရာရဲ့ နည်း လေးတွေ ကို ဖတ်ရှု ပြီး အားအင်နည်းပါး ၊မိန်းမသားဘ၀များ လှပခိုင်ခန့် ပါစေကြာင်း ဆုတောင်းမိပါတယ်..။
ကျမ်းကိုး။ မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော် ၊မြန်မာပြန် ၊ သဗ္ဗညုတဥာဏ၀ဂ် ၊ အမရာဒေ၀ီပဥှာ စာမျက်နှာ ၂၁၇။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:21 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် သူတော်ကောင်းတို့ နှလုံးသား
တစ်ရက်ခွဲ ခန့် လူမမာလုံးလုံး ဖြစ်သွား သောကျွန်မမှာ … ထိုအချိန်များ အတွင်း ကိုယ့်ကိုကို အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း ပွားများရလောက်အောင် စက်ဆုပ်ရွံရှာ ဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
ပထမ သွေးစတိုး ကာ အဖျားဝေဒနာ ဖြစ်တော့ သံပုရာရည်များ အသီးများ စား…. နောက်တော့ …ထိုအကျိုးဆက်က နောက်တစ်နေ့ တခါ ၀မ်းသွားသည် မှာ ၁၀ကြိမ်ထက်မနည်း..။
ငါ၏ ကိုယ်မှာ … နံ့သာမွှေးကြိုင် ..
အရေ တစ်မျိုး… ညှီနံ့ ဆိုးသည်
အသိုးအပုတ်ချည်းပါတကား..။ အနိစ္စ..ဒုက္ခ..အနတ္တ။ အသုဘ ပါတကား။ ရယ်လို့
သင်္ကြန် တွင်း တုံး က ဓမ္မစက္ခု ဆရာတော် အရှင် ဣန္ဒြိယ (သျှင်မိုးဝေ) သင်ကြားပေးတဲ့ ၃၂ ကောဋ္ဌာသ -တစပဉ္စက ကမ္မဋ္ဌာန်း အနုလုံ၊ ပဋိလုံ ဆင်ခြင် ပုံ ကို သတိရမိပါတယ်..။
အမှန်တကယ် နံစော်...ရေကလည်းမချိုးဝံ့။ မချိုးနိုင်...။ အင်္ကျီ များ ရေချိုးခန်းပုံထားပြီး လဲလှယ် ရပါတော့တယ်..။
ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် က ...* နင်.... ဇရာဆိုတာ လက်မခံ သေးဘူးလား၊ အမှန်လက်မခံဘူးလား၊ ပြန်မရ နိုင်တဲ့ နုပျိုမှု ကို သာယာနေသလား * ဆိုတာမျိုးမပြောသော်လည်းပြော သကဲ့ သို့ သတိပေးလာတာ ...။ သူငယ်ချင်း ရေ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ကြောင့် အတိတ်က ဓာတ်ပုံတင်တာများသွား တာပါ..အမှန်တော့ ငါက အိပ်ယာထဲ မှာ အသုဘ အပုပ်ကောင်ဖြစ်နေတာပါ..။
တရားအားထုတ်ရန်ကြွ လာတဲ့ ရဟန်း ၆ ကျိပ် ကို ဆွမ်းသင်္ကန်း၊ ကျောင်း၊ဆေး ဖြင့် ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းပြုစုလုပ်ကျွေး တဲ့ * မာတိက မာတာ* မယ်တော် သည်လည်း ၃၂ ကောဋ္ဌာသ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဖြင့် အနာဂါမ်တည် သွားတာ ဆရာတော်ကသင်ပေးခဲ့တာ.... လည်းမှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်..။
ကောဋ္ဌာသ ဆိုတာကတော့ အစုအပုံ လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်..။ ကျွန်မ တို့ အားလုံး ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အစုအပုံ ( ၃၂ ) ပုံ ပုံ လို့ ရပါတယ်..။ ကျွန်မ ပါဠိ၊ မြန်မာ ၊ အင်္ဂလိပ်ဖြင့် ခွဲခြမ်း စာရင်းပြုစု ရှုမှတ်ကြည့်ပါမယ်..။
ပထ၀ီဓာတ် သဘောအစု (၂၀)
၁။ ကေသာ = ဆံပင်ပေါင်း (၂၅၀-၀၀၀၀၀)ခန့် = Hair of the head
၂။ လောမာ= အမွှေး (၉၉၀၀၀၀) ခန့် =Hair of the body
၃။ နခါ = လက်သည်းခြေသည်း (၂၀) = Nails
၄။ ဒန္တာ = သွား (၃၂)ချောင်း = Teeth
၅။ တစော = အရေထူ၊ အရေပါး တစ်ကိုယ်လုံး ခွာလျှင် ဇီးစေ့ခန့်= Skin
၆။ မံသံ = အသားတစ် (၉၀၀)ခန့်= Flesh
၇။ နှာရု = အကြော (၇၀၀၀၀)= Sinews
၈။ အဋ္ဌိ = အရိုး (၃၀၀)= Bones
၉။ အဋ္ဌိ မဉ္ဖံ = ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၊ အရိုးထဲ မှ ဖြူသောအဆင်း= Bone Marrow
၁၀။ ၀က္ကံ = အညှို့ ၊ နှလုံးသားကိုခြံ ရံ တည်ရှိသော အသားစိုင် နှစ်ခု= Kidneys
၁၁။ ဟဒယံ = နှလုံး၊ တလက်ဖက်မျှသော နှလုံးသွေး၏ တည်ရာနှလုံးသား။= Heart
၁၂။ ယကနံ = အသည်း ၊ကသစ်ရွက် နှင့်တူ၏။= Liver
၁၃။ ကိလောမကံ = အမြှေး၊ နှစ်ခုသောအမြှေး = Membranes
၁၄။ ပိဟကံ = အဖျဉ်း ၊ သရက်ရွက် = Spleen
၁၅။ ပပ္ဖါသံ = အဆုတ်= Lungs
၁၆။ အန္တံ = အူမ ၊ နှစ်ဆယ့်တစ်ပတ်ခွေ = Bowels
၁၇။ အန္တဂုဏံ = အူသိမ်၊ အူမကြီးကို ရစ်ပတ်ခွေနေ၏။= Entrails
၁၈။ ဥဒရိယံ = အစာသစ် ၊စားပြီးစခွေးအံဖတ် နှင့်တူ၏ ။= Undigested Food
၁၉ ။ကရီသံ =အစာဟောင်း ၊ အစာအိမ်မှ ကျက်ပြီးသောကျင်ကြီး = Excrement
၂၀။။ မတ္ထလုင်္ဂံ = ဦးဏှောက် ။ မုန့်ညက်ခဲ နှင့်တူသောဖြူသော ဦးဏှောက်= Brain
အာပေါဓာတ် သဘောအစု (၁၂)
၂၁။ပိတ္တံ = သည်းခြေ = Bile
၂၂။ သေမှံ = သလိပ် =Phlegm
၂၃။ ပုဗ္ဗော= ပြည်ပုပ်= Pus
၂၄။ လောဟိတံ =သွေး = Blood
၂၅။ သေဒေါ = ချွေး ဆီကြည်အဆင်းရှိ ။= Sweat
၂၆။ မေဒေါ = အဆီခဲ= Fat
၂၇။ အဿု= မျက်ရည် = Tears
၂၈။ ၀ဿာ= ဆီကြည် = Grease
၂၉။ ခေဠာ= တံတွေး= Spittle
၃၀။ သိင်္ဃာဏိကာ = နှပ် =Mucus
၃၁။ လသိကာ= အစေး = Oil of the Joints
၃၂။မုတ္တံ = ကျင်ငယ် = Urine
ထို ၃၂ ကောဋ္ဌာသ အစုတို့ကို ရွတ်ဆိုပွားများ ပြီး..စက်ဆုပ်ဖွယ်…ဆင်ခြင်ရုံမျှ ဆိုတာကတော့ ပညတ်အာရုံ အသွင်သာ ယူထားတဲ့အတွက် သမထ အလုပ်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်..။
၀ိပဿနာ အဖြစ် ပွားများလို တယ်ဆိုရင်ဖြင့် …ပရမတ် အာရုံသို့ ပြောင်းပြီး ရုပ်ကာယ ရဲ့ သဘောအစစ်ကို မြင်အောင်ကြည့်ရပါမယ်..။ ၃၂ ကောဋ္ဌာသ တစ်ခု ချင်းစီကို ခွဲခြားပြီး…..ဥပမာ…ဆံပင် ဆိုလျှင်
ဤ ကိုယ်ကြီး မှာ……( ဆံပင် ) တို့ မည် သည်..အသီးအခြား ဖြစ်သော အစုမျှသာ ဖြစ်၏ ။ စိတ်စေတနာ မရှိ။ အဗျာကတသဘော ဖြစ်၏ ။သတ္တ၀ါ ၊ သူ၊ ငါ၊ မိန်းမ ၊ ယောင်္ကျား သဘောမဟုတ် ။ မာမှု ၊ပျော့မှု ဟူသော ပထ၀ီသဘောမျှ သာတည်း။
ဤ ကိုယ်ကြီး မှာ……( နှပ် ) တို့ မည် သည်..အသီးအခြား ဖြစ်သော အစုမျှသာ ဖြစ်၏ ။ စိတ်စေတနာ မရှိ။ အဗျာကတသဘော ဖြစ်၏ ။သတ္တ၀ါ ၊ သူ၊ ငါ၊ မိန်းမ ၊ ယောင်္ကျား သဘောမဟုတ် ။ ယိုမှု ၊စီးမှု ဟူသော အာပေါ ဓာတ် သဘောမျှ သာတည်း ။
ကျွန်မ အတွက် တော့ အမျိုးအမယ် ၃၂ မျိုး၊ သဘာဝ ကလည်းမတူတော့ ရှု မှတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်..တကယ်လည်းယိုစီး လိုက်…ထွက်ကျလိုက်ဆိုတော့..။ (ခယ= ကုန်ခြင်း၊ ၀ယ= ပျက်ခြင်း) သဘောတွေကို မြင် အောင်ကြည့် မိစေ လျက်..အိပ်ယာထက် မှာ နှစ်ရက်ခွဲတာ…. ဖြစ်အောင် အားထုတ် ရပါတော့တယ်..။
ကျမ်းကိုး = ဓမ္မစက္ခု ဆရာတော် အရှင် ဣန္ဒြိယ (သျှင်မိုးဝေ)၏ မဟာသတိပဋ္ဌာန် နှင့် မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါကျင့်စဉ် ၊ စာမျက်နှာ ၃၈-၄၃။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:28 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် သျှင်မိုးဝေ (ဓမ္မစက္ခုဆရာတော်)
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ က ကျွန်မ နဲ့ မြန်မာ့အော်ဂဲနစ
် စိုက်ပျိုးရေးမိသားစု များ ဟာ သံလျင် သဘာဝတရားရိပ်သာ မှာ အလှူဒါနများ ပြူလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်..။
သဘာဝ တရားရိပ်သာ လို့ဆိုရင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ..လူမမာများ ၊ စိတ်ရောဂါဝေဒနာသည်များ ၊ ခိုကိုးရာမဲ့သူများ ၊ ဒုက္ခသည် အမျိုးမျိုး ကို ကူညီလက်တွဲ ကာသာသနာပြုနေတဲ့ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ ရဲ့ တရားရိပ်သာ ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်..။
ဇာတိ ဆိုတာ ရလာတဲ့ သူတိုင်း ဇရာ ဆိုတဲ့ အိုခြင်းဒုက္ခ ကို ရင် ဆိုင်ကြရ မှာ အမှန်ပါ…။ ပဋိသန္ဓေ၊ အိုနာသေ ဟု လေးထွေရင်းမြစ် ဒုက္ခ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ…ကျွန်မ မှာ သိရှိနားလည် ထားသော်လည်း အိုမင်းမစွမ်း သူများရဲ့ ဖြစ်အင်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ရတဲ့အခါ မှာတော့ စိတ်နှလုံးသည် ညံ့သက်ငုတ်လျှိုး သွား ခဲ့ပါတယ်..။
ဆရာတော်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရား… ဝေယျာဝစ္စ ၀ိုင်းဝန်းသူများ ရဲ့ စေတနာ တရား မလေးစား မဦးညွှတ်ပဲ မနေနိုင်ခဲ့ပါ..။
ကိုယ်က ကိုယ့်ခန္ဓာ ကိုယ် သယ်နိုင် နေသေးတာ မို့ ဒီ လို အချိန် ရောက်ဘို့ အတန်ငယ် ကာလ တစ်ခု ဝေးသေးတယ် လို့ ထင်နေပေမဲ့ အိုမင်းမစွမ်း ဆိုတဲ့ မစွမ်းသန်သောအချိန်မှာ ဖျတ်ကနဲ ရောက်လာနိုင် တာကိုလည်းကျွန်မ ထည့်တွက်မိပါတယ်..။
ကျွန်မ နဲ့အတူ သုတေသနများ..ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ လက်တွဲလုပ်ကိုင် မယ် လို့ ကြံစည်ပြောဆိုနေတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ဟာ ဖျတ်ကနဲ လေဖြတ်သွားခဲ့တာ..။ကျွန်မ ကိုယ်တွေ့…ကိုယ့်ဆီ ဒီဒုက္ခ အချိန်မရွေးကျရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ မထည့်တွက်ချင်လို့ မရပါ..။
ကိုယ်က ဘယ်လို သြဇာပေးစေခိုင်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါစေ… ဦးဆောင် ဦးရွက် ပြုနေသူဖြစ်ပါစေ……. မစွမ်း တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ ..ဘေးကပြုသမျှ…. ကောင်းသည် ဆိုးသည် ရွေးချယ် နိုင်စွမ်းပင်မရှိ…၊ညင်းပယ်နိုင်အားမရှိ ၊တိတ်ဆိတ်စွာ လက်ခံ ရတော့သည်သာ..။
သဘာဝ တရားရိပ်သာ ကတော့ လူ့လောက ဇာတ်ခုံ မှ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် အမျိုးမျိုး မှ သရုပ်ဆောင်များ သဖွယ် သင်္ခန်းစာများ..သံဝေဂများ..ဆင်ခြင်ဥာဏ်များ ကို ပေးဝေနေတယ် လို့ ကျွန်မ ကထင်မြင်မိပါတယ်..။
ကိုယ်က ပစ္စည်းဥစ္စာ ရှာ ထားခဲ့သောလည်း အတူနေသူ တူ၊ တူမများ က ရွှေ အတု ကို အစစ် နဲ့ လဲလှယ် ယူထားပါသတဲ့..။ ပြီးတော့မယောင်မလည် နဲ့ သိမ်းသွင်းဆွဲဆောင်ခေါ်ယူကာ သဘာဝ ရိပ်သာ နားမှာ ပစ်ထားခဲ့ ပါတယ်။ ကိုယ် ရှာထားခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ က ချမ်းသာအစစ်ကို မပေးစွမ်းနိုင်မကယ်တင်နိုင်တာကို ရုတ်တရက် အစိမ်းသက်သက် လက်ခံ လိုက်ရချိန်မှာ စိတ်ကမခိုင်…. ယိုင်နဲ့ လဲပြိုရတော့တဲ့အဖွား..တစ်ယောက်…။
၀မ်းနဲ့ ဆီးက မလွတ်တော့ အိမ်သာထိုင်ခုံလေး ကုတင်နားထားပြီး ကိုယ့် ကျင်ကြီးကျင်ငယ်နံ့ နဲ့ကိုယ် နပန်းလုံးကာနေရရှာသော အဖွားတစ်ယောက်မှာတော့ ကျွန်မ တို့ အလှူ ပစ္စည်းပေးတဲ့အခါ ရှိုက်ကြီးတစ်ငင် ငိုချ လိုက်ပါတယ်…။ အကြောင်းပြချက်ကိုမပြောပြသော်လည်း တစ်ခါက သူရှာဖွေကျွေးမွေး ပြုစုယုယခဲ့သော သားသမီးများ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းများ ကို သတိရသည်လား..နာကျည်းသည်လား…၀မ်းနည်းအားငယ် သည်လား မှန်းဆလို့သာ တွေးမိပါတယ်..။
အဖွားဒေါ်တင်ကြည်တဲ့..အသက် က ၈၀ ရှိပြီ..သားသမီး ကလည်းမပစ်ပယ်ခဲ့ပါ..အခုထိ ခင်တွယ် နေဆဲ..။ သို့သော် သမီးက ၄၅ နှစ် ဦးနှောက် ကမကောင်း ဆေးကလည်းကုနေရသေးဆိုတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာဝန် က လေးလံ လှ ပြီ ထင်တာ…နှစ်ယောက်စာ ထမ်းရတော့မနိုင်မနင်း..လမ်းဘေး ဆင်းနေရတဲ့ဘ၀…..။ တရားရိပ်သာ ရောက်မှ ကူမဲ့ ကယ်မဲ့လက်များ ဖမ်းဆုပ်ထားခဲ့ရ..သမီးကိုလည်းထားခဲ့ ဘို့ စိတ်ချသွား..ရပါတယ်တဲ့..။
ကုတင် ၁၀ လုံးခန့် ထည့်ထားတဲ့ တဲတန်းလျားရှည် လေးထဲ မှာတော့ အဖိုး လို့ လည်းမဆိုနိုင်…. သက်လတ်တန်း အမျိုးသား တစ်ချို့ကတော့ ကြောင်စီစီ မျက်လုံးများ အပြူးသားနဲ့..ကုတင် တစ်လုံး မှာကတော့ ပုဆိုး ပင်မလုံချင်…။ ပုံမှန် အနေအထားမဟုတ်လေတော့ သူတို့သည် နုပျိုစဉ် က သူတို့ ရဲ့ ပုံမှန်စိတ် ဓာတ် ကြံ့ခိုင်မှု များကို တိုက်စားဖြိုဖျက် ခဲ့တဲ့ မူးယစ်သေစာ များသုံးစွဲခဲ့လေသလား..ရယ်လို့ ခန့်မှန်းကြည့်ရပါတယ်..။
သေခြင်း တရားဆိုတာ အချိန်မရွေး ဖျတ်ကနဲ သေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ မရဏာ နုဿတိ ကတော့ လေယာဉ်စီးချိန် ၊ ကားစီးချိန် ၊ ရထားစီးချိန် ၊ ထိုင် နေချိန် လမ်းလျှောက်နေချိန် Accident သတင်းများဖတ်မိနေချိန်မှာ (ငါလည်း တနေ့ ဒီလို --- အခုနေ သေရင် အကုန် တန်းလန်းထားခဲ့ရမယ်) ဆိုတာ နှလုံးသွင်းသွင်းနေဖြစ်တာမို့ နှလုံးသားဟာ သေခြင်း သတိဖြင့် ထုံနေခဲ့ပါတယ်..။
မသေပဲ ဒုက္ခိတ ဘ၀ နဲ့ အိုနေခဲ့ရင် ဆိုတာ ကို တော့ ထို ရိပ်သာ ရောက်မှ ကျွန်မပြက်ပြက်ထင်ထင် တွေး မိပါတော့တယ်..။ မကြာခင် ကျရောက်လာတော့မဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ အိုချိန် ၊နာချိန် ကို ကျွန်မ ဘယ်လို ပြင်ဆင် မည် လဲဆိုတဲ့ အတွေး ကို မတွေးချင်လို့မရ ကျွန်မ စနစ်တကျ တွေးရပါတော့မယ်..။
ဒီအချိန် မှာတော့ ကျွန်မဟာ အသက် ၈၃ နှစ် ထိ လူ့လောက ထဲနေသွားခဲ့သောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီး နှင့် ၈၈နှစ်ထိ နေသွားခဲ့သောကျေးဇူးရှင်ဖခင် ကြီး နှင့် လက်ပွန်းတတီး နေထိုင် ခဲ့ဘူးသော ကျွန်မ မှာ တစ်ချိန် မိဘ တွေ နဲ့ နေခဲ့ရချိန်ကို အထူးပဲ လွမ်း ဆွတ် သတိရ မိပါတယ်…။
ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများဖြစ်တဲ့အပြင် ၊ မိုးညှင်းဆရာတော်ဘုရား ကြီး ရဲ့ တရားရိပ်သာ မှာ တရားအားထုတ်ထားခဲ့သော ကျွန်မ ရဲ့ကျေးဇူးရှင် မိဘ နှစ်ပါးသည် စနစ်တကျ အို သွားခဲ့တာ ဆိုတာ (တစ်နည်း ) လူအိုဘ၀ကို စနစ်တကျဖြတ်သန်းခဲ့တယ် ဆိုတာ ကျွန်မ ပြန်တွေးလို့ ရခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် စတက်တော့ မိဘများ ပင်စင်ယူတဲ့နှစ်ပါ..။ ကျွန်မ ကျောင်းပြီး လို့ ပြန်လာချိန်မှာ အိုမင်းတဲ့ ဘ၀ကို စနစ်တကျ ဖြတ်သန်း နေခဲ့တယ်..။ စေ့စပ်ချွေတာ ရေးတရား ဟော ကာ နေရာတကာ မိန့်ခွန်းချွေလေ့ရှိသော ဖခင်ကြီး မှာ တရားကက်ဆက် တစ်လုံးဖြင့် စားပွဲမှာ ထိုင်ကာ…ပရိယတ္တိအသင်းမှ ငွေစက္ကူ အစုတ်များကို ပြုပြင်ဖာထေး ၊ ဘဏ်မှာ အသစ်လှဲလှယ် ပေးသည် မှာ နိစ္စဓူဝအလုပ်..။
ဆုံးမ စကား အမြဲပြော ကာအိမ်မှုကိစ္စ များစီမံကွပ်ကဲ တတ်သောမိခင်ကြီး မှာ နဂိုကထက်စကားနည်းသွားတယ်..။ မျက်စေ့မှုန် လို့ ကျွန်မ အား ပရိတ်တော်များကို စာလုံးမည်းမည်းကြီးကြီး နဲ့ ရေးပေးရန်ပြောပါတယ်..။
ကနုတ်ပန်းဖြင့် အလှဆင်ထားသော နှစ်ယောက်အိပ်ကျွန်း ကုတင်ကြီး ကိုဖြုက်သိမ်းလျက် တစ်ယောက်အိပ် သစ်သားကုတင် နှစ်လုံးကို စားပွဲခြားလျက် အဆောင်လို နေသွားသည် မှာ သေသည်အထိ..။
ကျွန်မ မှတ်မိနေတဲ့ စကားလုံးတစ်ခု အခု ကျွန်မ ပြန်လည်ပုံဖေါ် ကြည့်မိပါတယ်..။ သမီးရေ.. *ဘဘ( ကျွန်မ မှ လွဲ၍ အစ်ကို အစ်မများက အဖေ့ကိုဘဘ ဟုခေါ်ကြပါတယ်) တို့ အသက်ကြီးလာပြီး…ကလေးတွေ သားသမီး တွေ ငရဲမကြီးအောင် တတ်နိုင်သမျှ နေသွားတော့မယ်* တဲ့..။
ရိပ်သာ မှ ပြန်လာစဉ် အတွေး မှတဆင့် ကျွန်မ ဖခင်ကြီးပြောခဲ့ဘူးသော ထိုစကားလုံးကို ပြန်လည် သတိရမိပါတယ်..။
-ပစ်ပယ် ကြသော သားသမီး..များလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်..။
-ယုယချစ်ခင် ကြသော သားသမီးတပည့်တပန်းများလည်း ရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ်..။
-ပြစ်မှား စော်ကားကြမဲ့ ကလေးများတွေ့ခဲ့ရင်တောင်..မကျူးလွန် ခင် ကိုယ်အနေတတ်ဘို့ လိုသည် မဟုတ်ပါလား..။အပြောတတ်ဘို့ လိုသည်မဟုတ်ပါလား..။
တရားအသိ ဖြင့် ကိုယ်ကငြိမ်းအေးခဲ့ပြီ ဖြစ် ပါတယ်..။ သို့သော်လည်း...ကိုယ့်ရဲ့ တရားစွမ်းအားကြောင့် မသိနားမလည် သူများ ပြစ်မှားခဲ့ပါကတန်ပြန် အား မသက်ရောက်စေ လိုပါ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်…. ကျွန်မ မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့ မဲ့ အိုမင်းမစွမ်း ဘ၀ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကတော့ ကလေး တွေ ငရဲမကြီး အောင် နေထိုင်ပေးဘို့ ပါပဲ..။
ဤစာစုဖြင့် ရဲရင့်စွာ သာသနာပြုလျက်ရှိပါသော ကျေးဇူးတော်ရှင် သဘာဝ တရားရိပ်သာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရကို ဦးညွှတ်ကန်တော့အပ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:19 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ကျွန်မ ရဲ့ သံဝေဂများ
မက္ခ နှင့် ထမ္ဘ ( နေက္ခမ္မ ပါရမီသို့ ဦးညွှတ်ပူဇော် ခြင်း)
ဒီတရား နှစ်ပါး ဟာမာရ်နတ် ရဲ့ အဋ္ဌမ မြောက်စစ်တပ် တွေ ဖြစ်ပါတယ်.။
ကျးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ဖြည့်တင်းဆည်းပူတော် မူခဲ့တဲ့ ပါရမီ များစွာ ထဲက နေက္ခမ္မ ပါရမီ ( ဆွဲဆောင်မှုများမှ ရုန်းထွက်ခြင်း ပါရမီ) ကို ရိုးကျိုးဦးခိုက် ပူဇော် ရင်း ဒီစာစုကို ရေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ။ ထို ရုန်းထွက်ခြင်းသည်လည်း မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆွဲဆောင်မှုများ မှ ရုန်းထွက်ခြင်း မဟုတ်..။ လောကအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရုန်းထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ နေက္ခမ္မပါရမီ အနေနဲ့ ရုန်းထွက်ရမဲ့ ကိလေသာကာမ၊ ၀တ္ထုကာမ တို့ကို မာရ်နတ် ရဲ့ တပ်မကြီး (၁၀) တပ်အဖြစ်တင်စား ၍ ကျမ်းဂန်တွေကဆိုပါတယ်..။
အရင်က ကျွန်မ ဟာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ရဲ့ ပါရမီ တော် (၁၀) ပါးများထဲ မှ နေက္ခမ္မ ပါရမီကို ပူဇော် ကြည့်ညိုရေးသားနေခဲ့တာ မာရ်နတ် ရဲ့ ပဉ္စမ မြောက် စစ်တပ်ထိ ပြီးခဲ့ ပြီ ဖြစ်ပါတယ်.။
အခု ရေးမဲ့ *မက္ခ* နဲ့ *ထမ္ဘ* ကတော့ အဋ္ဌမမြောက်စစ်တပ် ဖြစ်ပါတယ်..။ ကျွန်မ တို့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ အောင်မြင်ရိပ် ကို တွေ့ တဲ့အခါ တွေ့သည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ရှေ့သွား ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ရဲ့ ကျေးဇူးကို ပယ် ဖျက်တတ်ကြပါတယ်..။
မိမိသာ လျှင် အတော်ဆုံး၊ အတတ်ဆုံး ၊ အဖြစ် တစ်စင်ထောင်တတ်ကြပါတယ် ၊ ဤသို့ သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်ခြင်း *မက္ခ* နှင့် တစ်စင်ထောင်ခြင်း ထမ္ဘ တို့ ကိုပြုမိကြတယ် ဆိုလျှင် မာရ်နတ် ရဲ့ အဋ္ဌမ မြောက် စစ်တပ် မှာ ကျဆုံးတယ်လို့ မှတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ပိုပြီး အကျယ် တစ်ဝင့်ဖွင့်ဆိုရမယ် ဆိုလျှင်...
*မက္ခ* ဆိုတဲ့စကား ကို အတိုဆုံး ဖေါ်ပြ တဲ့အခါ ( သူ့ကျေးဇူးကိုချေဖျက်မှု) လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်..။ အဘိဓာန် မှာ ရှာဖွေ တဲ့အခါ မှာတော့ သူတစ်ပါး ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ကြိတ်ချေဖျက်ဆီးခြင်း ၊သူတစ်ပါး ရဲ့ ကျေးဇူးကို မသိခြင်း ၊ဖုံးကွယ်လိုခြင်း ၊ရေချိုးပြီး ကာစ မှာ ကိုယ်ပေါ် မှ ရေကို ကိုယ်သုတ်ပုဝါ ဖြင့် ပြောင်စင်အောင်သုတ်ပစ်သကဲ့သို့ အခြားသူများ ရဲ့ ဂုဏ် နဲ့ ကျေးဇူး တို့ကို ဘာမှ မကျန်အောင် ကာယကံ ၊ ၀စီကံမြောက် ၊ ထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ဆီးခြင်း သည် *မက္ခ* ရဲ့ အလုပ်ကိစ္စ (ရသ) ဖြစ်ပါတယ်..။ ဂုဏ်တွေ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမလာအောင် လည်းဖုံးကွယ် တတ်တဲ့သဘောတွေလည်းပါပါတယ်..။ဂုဏ် တွေ ကျေးဇူးတရားတွေကို ဖေါ်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲ ၊မကောင်းကွက်ကိုသာပြောဆိုနိုင်တော့တာ ဟာ *မက္ခ* ရဲ့ သဘောပါ။
ထို *မက္ခ* ရဲ့ သဘောကို ဥပမာပေးတဲ့အခါ မစင်ကိုင်ပြီး ကျေးဇူးပြုဘူးသူအားပစ်ပေါက်တာ နဲ့ တူပါတယ်တဲ့..။ မစင် နဲ့ ပစ်ပေါက်တယ် ဆိုလျှင် မိမိလက်ကုိရှေးဦးစွာ မစင်လူးသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်သူအား ရှေးဦးစွာ အကျိုးမဲ့ ဖြစ်စေပါတယ် ..။
ထမ္ဘ ဆိုတာကတော့ ဆရာကြီးဦးရွှေအောင် စာအုပ် မှာ ကတော့ မိမိကိုယ်ကို တစ်စင်ထောင်မှု လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်..။ ကျွန်မ ရဲ့ အိုင်ပက် တိပိဋက အဘိဓာန်ကျမ်းအရ ရှာကြည့်တဲ့အခါ မှာတော့ မာန+ ဒေါသ+ လောဘ စတဲ့ကိလေသာတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကိလေသာ ကြောင့် စိတ်ရဲ့ တောင့်မာခြင်းအကြောင်း လို့ ဆိုပါတယ်..။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ထွန်တုံးမြို သော စပါးကြီးမြွေ ကဲ့သို့ တောင့်ခိုင်နေတာ၊ မကိုင်းညွတ်၊ မရိုသေခြင်း အကြောင်း လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်..။ လေဖြင့်ပြည့်သော အိတ်ကဲ့သို့ တင်းမာခြင်း ၊မပျော့ပြောင်းခြင်း အကြောင်း ၊ သည် *ထမ္ဘ* ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီတပ်မ ဟာ အခြားသော တပ်မများထက် ပိုပြီး သိမ်မွေ့ နက်နဲလှပါတယ်..။အပ္ပမာဒ တရားကင်းမဲ့ လျှင် ဤ တပ်မ မှာ ကျဆုံး တတ်ကြတာ… ။ မြန်မာ ရာဇ၀င် ကို ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုလျှင် အလောင်းစည်သူမင်းကြီး က * ဘေးတော် ၊ ဘိုးတော်များသည် ငါ့လောက် ဘုန်းကံမကြီး * လို့ နှုတ်က မြွက် လိုက်တာ နဲ့ တစ်ပြိုင်နက် သူ့ ရဲ့ မျက်စိများကွယ် သွား တယ် ဆိုတာ မှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်..။
အမှန်မှာကတော့ ဘေးတော်..ဘိုးတော်များကို အထင်သေးစိတ် ၊စော်ကားလိုတဲ့စိတ် နဲ့ မြွက်ဆို ကြုံးဝါးခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး..။ သူ့ယုံကြည်မှု နဲ့ သူ သဘောရိုး ဖြင့် မြွက်ဆိုခဲ့တာ တောင် စိတ်လှိုင်း တွေ ရဲ့ သဘာဝ က မျက်နှာ မလိုက် မာရ်နတ်က အဋ္ဌမ မြောက် စစ်တပ်ဖြင့် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်သည့်အခါ မျက်စိ ကွယ် ခဲ့ရဘူးပါတယ်..။
ဒါကြောင့် မို့ ကျွန်မ တို့ ရဲ့ ကျေးဇူးတော်၇ှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက လောက အောင်မြင်မှု သော့တံခါးသည် ကျေးဇူး တရားကို သိတတ်ခြင်း ရယ်လို့ ထောက်ပြ ဆုံးမခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ရခဲ လှတဲ့ ပု ဂ္ဂိုလ် (၃) မျိုး ထဲ မှာ -(၁) မိမိ အပေါ်ပြုဘူးတဲ့ ကျေးဇူး ရှိပါတယ်အသိအမှတ်ပြုတဲ့သူ (၂) ကျေးဇူးရှိပါတယ်လို့ လို့ထုတ်ဖေါ် ပြောဘူးတဲ့လူ။(၃) ကျေးဇူးကို ဆပ်တတ်တဲ့ သူ ဆိုတာ ရခဲ လှပါတယ် တဲ့..။
လောက ဆိုတာကလည်း ထို သို့ သူတထူးရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့ သူ ဆိုတာ အလွန် ရှားပါးပါတယ် တဲ့…. ငါသိ၊ ငါတတ် တယ် ဆို တဲ့ *မက္ခ* နဲ့ *ထမ္ဘ* ရှိသူများ သာပေါများ လှပါတယ်..။ ဒါကြောင့်လည်း သိပ်တော် သိပ်တတ်သော်လည်း မာရ်နတ် ရဲ့ အဋ္ဌမ တပ်မ မှာ ကျဆုံးရတဲ့သူတွေ များ တော့တာပါပဲ..။ ခေတ်စကား အရဆိုရင်တော့ မြောင်းထဲ ရောက်ရတော့တာ..။
ဒီတပ် မမှာ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး တောင် သတိလက်လွတ် ဖြစ်ရသေးတာ ဆိုတော့ ကျွန်မ တို့ လူသာမန် တွေအဘို့ ဒီတပ်မ ရဲ့ အောက်မှာ အလဲလဲ အကွဲ ကွဲ ပေါ့နော်..။ ကျွန်မ ဒီပိုစ့် ရေး တာက ကျေးဇူးမသိမှုကို အပြစ် တင် ထောက်ပြရန်မဟုတ်..သိရှိပြီး ဘယ်လို ကျော်လွှားကြမလဲ ဆိုတာကို မျှဝေချင်တာသက်သက်ပါ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ရဲ့ *မက္ခ* နဲ့ *ထမ္ဘ* ကိုမောင်ထုတ် ခြင်းကို နမူနာအဖြစ် ပြောပြပူဇော်ပါရစေ..။
ကျွန်မ တို့ ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာ ဘုရား သည်..* သစ္စာလေးပါး ၊မြတ်တရားကို ဆရာမရှိ၊ ကိုယ်တော်တိုင် သိတော်မူ ခဲ့တာ..။ မိမိဘာသာမိမိ ထိုးထွင်း သိရှိတော်မူခဲ့တာ * ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆရာမရှိ ခြင်းအပေါ် မည်သို့ နှလုံးသွင်း ကာ *မက္ခ* နဲ့ *ထမ္ဘ* ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါသနည်း။ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်..။
မိမိသည် သစ္စာလေးပါး ၊ မြတ်တရားကို အသစ်အဆန်းအနေနှင့်သိခြင်း မဟုတ် ၊ ရှေးဘုရားများသိတော်မူသည့်အတိုင်းသာ ၊ သိခြင်း ဖြစ်တယ် ဟူ၍ လည်းကောင်း။
• မိမိသည် ရှေးရှေးဘုရားများကျင့်တော်မူသည့်အတိုင်းသာ ကျင့် ခြင်းဖြစ်သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း ။
• မိမိသည် ရှေးဘုရားများ အနွယ် သာ ဖြစ်သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း ။
ဖခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒန မင်းကြီး အားမိန့် ကြားတော် မူသည့်အပြင် *မက္ခ* နဲ့ *ထမ္ဘ* ကိုမောင်းထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ် တဲ့..။
အရာရာ ကို ငါ ဖယ်ထားရင်တော့အဆင်အပြေဆုံးပါ။
ငါမဖယ်နိုင်သေးရင်တော့ ကျေးဇူးတရား များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း ။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း။ တတ်စွမ်းသရွေ့ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာ ရှိရပါမယ်။
အရာရာ အကြောင်းညီညွတ်မှသာဖြစ်တ္တ်တာ ငါတော် ငါတတ် ငါစီမံတတ်လို့မဟုတ် ဆိုတဲ့ရင်ထဲကစပါးကြီးမြွေတွေ ကိုဖယ်ထုတ်ရပါမယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ဖြည့်တင်းဆည်းပူတော် မူခဲ့တဲ့ ပါရမီ များစွာ ထဲက နေက္ခမ္မ ပါရမီ ( ဆွဲဆောင်မှုများမှ ရုန်းထွက်ခြင်း ပါရမီ) ကို ရိုးကျိုးဦးခိုက် ပူဇော်လိုက်ပါရစေ..။ ကျွန်မ တို့သည် လည်း မာရ်နတ် ရဲ့ တပ်မတွေကနေ လောကအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရုန်းထွက်ဘို့ ကျွန်မ တို့ ရင် ထဲက *မက္ခ* နဲ့ *ထမ္ဘ* ကို ရှာဖွေ မောင်းထုတ်ကြ ရအောင်ပါ..။
ကျမ်းကိုး-ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်(လောကသား တို့ရဲ့အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင် -စာ
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:16 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ပါရမီ(၁၀)ပါး သို့ ဦးညွှတ် ပူဇော်ခြင်း
အမရာ ရဲ့ နှလုံးသား အလင်းရောင် (သူတော်ကောင်းတို့ နှ...